REENOEMANN: May 2009
Posted by Ree Noe Mann at 11:59:00 PM 19 comments:
Posted by Ree Noe Mann at 11:59:00 PM9comments:
အမယ်မင်း ငြီးရတော့မယ်ဗျ။ အမဝါ ဆီမှာ ဖတ်ပြီးကတည်းက ငြီးချင်နေတာ။ ခုမှပဲ ဆန္ဒပြည့်တော့တယ် ကိုတောင်ပေါ်သားရေ။ (သက်သက်ပြောတာ)
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ မလေးရှားကို အသိအမတွေဆီက ပိုက်ဆံ ၆သိန်းချေးပြီထွက်လာခဲ့တာ။ ကုန်တာတော့ အားလုံးပေါင်း ၉သိန်းလောက်ကုန်တယ်။ ကိုယ့်ရှိတာလေးနဲ့ ဖြည့်ပြီထွက်လာခဲ့တာ။ မလေးရှားရောက်တော့ ငွေဈေးကကျ အိုတီကမရှိ ဆိုတော့ တစ်လတစ်လ မနည်းချစ်ချုတ်ပြီး လွဲတာတောင် တစ်နှစ်လောက်ကြာမှ အကြွေးက ကျေတော့တယ်။ မလေးရှားမှာ သုံးနှစ်နေခဲ့တယ်။ တစ်နှစ်က အကြွေးဆပ်လို့ကုန်သွားတယ်။ ကျန်တဲ့ နှစ်နှစ်က ပို့လိုက် ကိုယ်သုံးလိုက်နဲ့ ဘာမှကို မစုမိဘူး။ ဒီကြာထဲ အိမ်မှာက ပြသနာဖြစ်ပြန်တော့ ကိုယ်ပို့တဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ပဲ ဖြေးရှင်းပေးရတာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၇မှာ ရန်ကုန်ကို ပြန်ရောက်တယ်။ မလေးရှားတော့ စိတ်ကုန်တယ်။ စင်ကာပူ လောက်မှ အဆင်ပြေနိုင်မယ် ဆိုပြီး စင်ကာပူ ထွက်ဖို့ကြိုးစားရတော့တာပေါ့။ မလေးမှာ နေတုန်းကဘာမှ မစုထားနိုင်တော့ ခုစင်ကာပူ ထွက်ဖို့ လုပ်တော့လည်း သူများဆီက ချေးငှားပြီး ထွက်လာရတာပေါ့။ ဟော့ .....ကြည့် ဒီရောက်ပြန်တော့ လည်း ကံဆိုးမ သွားရာ မိုးလိုက်လို့ ရွာဆိုသလိုပဲ ငွေဈေးများ ကျသွားလိုက်တာ အရင်က စင်ကာပူတစ်ဒေါ်လာကို မြန်မာငွေ ၈၀၀ကျော် ရှိရာကနေ ၆၀၀လောက်ထိကို ထိုးဆင်းသွားတာ လူတောင်ထိုင်ငိုချင် စိတ်ပေါက်သွားတယ်။
ကဲထားပါလေ။ ငွေဈေးကျပင်မဲ့လည်း အလုပ်ကောင်းလို့ ရှိရင် အိုတီများများရရင်တော့ ဖြေသာပါသေးတယ်ပေါ့ ဆိုပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ဖြေနေရင်း စင်ကာပူ စီးပွားရေးက ကျဆင်းလာတဲ့ အချိန်နဲ့ တည်တည်ကြီး ကိုတိုးတော့တာပေါ့။ နိုင်ငံတစ်ကာ စီးပွားရေးကျတာ ကျနော်တို့နဲ့ ဘာဆိုင်လဲနော့။ သူ့တို့ဟာသူတို့ ကျတာ နေရင်းထိုင်ရင်း ကျနော်တို့ အိုတီပါထိခိုက်တာပေါ့။ ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် အမေရိကန်သမ္မတ အိုးဘားမားကို သွားပြောထားတာ ခုသူ့က ခဏလေးနေအုန်း အန်တီစု ကိစ္စပြီးမှ ကြည့်လုပ်ပေးမယ်တဲ့ လေ။
ခုလည်း ဒီရောက်တာ တစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီ။ ကြွေးက မကျေသေးဘူး။ ကြွေးရှင်တွေကလည်း အော်လှပြီ။ ဒီကကောင်လည်း ကြောက်လို့ ပြေးရမလား အောင်မေ့ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်လောက ကနားပါအုံးမယ် ဆိုတဲ့ လူနဲ့ချည်း လာလာတွေ့နေရတယ်။
ဒါကတော့ ကျနော်ရဲ့ နိုင်ငံဂျားပြန်ရဲ့ ငြီးချင်းပါ။ သူများတွေ ကိုယ့်ကို အထင်ကြီးလာ မကြီးလာတော့ မသိဘူး။ ကိုယ့်ကတော့ နိုင်ငံခြားရောက်နေရသူတွေရဲ့ ဒုက္ခ၊ နိုင်ငံခြားက ပြန်ရောက်နေရတဲ့ လူတွေရဲ့ ဒုက္ခကို ကိုယ်တိုင်သိတော့ ခံစားနားလည်နိုင်ပါတယ်။
ကဲ ညီလေးတောင်ပေါ်ရေ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကျေနပ်နိုင်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်ကွာ။ ကိုယ်လည်း မငြီးတက် ငြီးတက်နဲ့ ငြီးထားရတာပါ။ ဒီထက်ငြီးမိရင်လည်း ကိုယ့်အရှက် ကိုယ့်ဖေါ်သလိုဖြစ်မှာကြောက်လို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်တော့ ညီလေးတောင်ပေါ်ရေ။
ဒီတစ်ခါတော့ ဘယ်သူ့မှ မတက်ခ်တော့ ပါဘူးလေ ။ ကိုယ့် ဘဝနဲ့ ကိုယ် ပဲရှိပါစေတော့ဗျာ။
Posted by Ree Noe Mann at 12:40:00 AM 17 comments:
2007 ဇွန်လ မှာ ရန်ကုန်ကို မလေးရှားကနေ ပြန်ရောက်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပြန်ထွက်ဖို့ ကြိုစားတာပေါ့။ အချိန်တစ်နှစ်နီးပါးလောက် ကြာသွားတယ်။ ဒီကြားထဲလည်း ဟိုသင်တန်းတက်လိုက်၊ ဒီသင်တန်းတက်လိုက်နဲ့ အချိန်တွေကိုကုန်ဆုံးစေခဲ့တယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် မြန်မာပြည်ကြီး ကို ချစ်တယ်။ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုကို တန်းဖိုးထားတယ်။ မြန်မာတွေရဲ့ ကူညီတက်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားတယ်။ ဒါပင်မဲ့ ကျနော် မြန်မာပြည်မှာ မနေချင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မလေးရှားမှာ ရှိတဲ့ တောထဲကိုရောက်ပြီးကတည်းက ဆိုရမှာပေါ့။ တော ဆိုပင်မဲ့ ပြည်နယ် နှင့်တိုင်းမှာ ရှိကြတဲ့ မြို့တွေထက်သာတာတော့ လက်ခံတယ်။ အထင်ကြီးလို့ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ အရမ်းကို ကွာခြားနေလို့ ပြောတာပါ။
သူငယ်ချင်းတွေကထင်ကြအုံးမယ်။လွတ်လပ်လို့နေမှာပေါ့လို့။ အမှန်က ကျနော် ၁၀တန်းအောင်ပြီးကတည်းက လွတ်လွတ်လပ်လပ် တစ်ယောက်ထဲ နေလာခဲ့တာပါ။ သူများအိမ်မှာလည်းနေဖူးတယ်။ အဆောင်မှာလည်း နေဖူးတယ်။ အခန်းငှားပြီးတော့လည်းနေရဖူးတယ်။ ဒါတွေအားလုံးက မိဘနဲ့ နေရတာလောက် မကောင်းဘူးဆိုတာ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း သိပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က အေးအေးဆေးဆေး နေရခြင်းကို မြတ်နိုးသူပါ။
မှတ်မိနေသေးတယ်။ ကျနော် ၂တန်းနှစ်တုန်းကပေါ့။ ကျနော်တို့ ကစစ်တပ်မိသားစုဆိုတော့ ဟိုပြောင်းဒီပြောင်း သိပ်ကိုများပါတယ်။ ပစ္စည်းများများ စုထားလို့ မရပါဘူး။ ရှိတာတွေကိုလည်း သေတ္တာတွေနဲ့ ထည့်ထားရတာပါ။ အဝတ်ဆိုလည်း အဝတ်သေတ္တာနဲ့ပေါ့။ အမေနဲ့ ကျနော့် အဝတ်တွေကို သေတ္တာတစ်လုံးထဲမှာပေါင်း ထည့်တယ်။ အဖေ ရှေ့တန်းပြန်လာတော့ သေတ္တာသေးသေးလေး တစ်လုံးပါလာတယ်။ (ရှေ့တန်းထွက်ရင် အရာရှိတွေသုံးတဲ့ သံသေတ္တာလေးပါ) အဖေပြန်ရောက် ပြီးဆိုရင် ကျနော်က တစ်စခန်းထပြီ။ ကျနော် အဝတ်တွေကိုထုတ်ပြီး အဲ့ဒီသေတ္တာလေးထဲ ကိုထည့်တယ်။ အမေက ပြန်ထုတ်တယ်။( အဖေအတွက် နောက်တစ်ခေါက် သုံးရအုံးမှာကိုအမေ ကသိနေတာပေါ့) ကျနော်က မသိတော့ သွားပြန်ထည့်လိုက်လိုက်နဲ့ နောက်ဆုံးတော့ အရိုက်ခံရပါလေရောဗျာ။ တစ်ယောက်ထဲ နေချင်တာကို ပြောပြတာပါ။
ကျနော် အရိုက်ခံရတော့ အဖေက မနေနိုင်တော့ဘူး။ သူ့ တပ်ခွဲက ဆရာကြီးတစ်ယောက်ကို သေတ္တာ တစ်လုံးထပ်ရှာခိုင်းတယ်။ အဖေ သေတ္တာလေးကို ကျနော်ရလိုက်တယ်။ ကျနော်ကတော့ ကိုယ်လိုချင်တာ ရတော့ ပျော်နေတာပေါ့။ အမေဆို ကျနော်ကို အမြဲပြောတယ်။ တစ်ကိုယ်ကောင်း သမားတဲ့။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း သိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ အရမ်းတစ်ကိုယ်ကောင်းဆံတယ်။ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ် ။ ပြင်လို့ရတဲ့ အခါပြင်တယ် ။ ပြင်လို့မရရင် ရေလိုက်ငါးလိုက်နေလိုက်တယ်။ ရေးနေရင်နဲ့ဘယ်ရောက် သွားပြန်ပါလိမ့် နော်.......................
အမြန်ဆုံးပြန်ထွက်ချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဟိုသွားဒီသွား ဟိုမေးဒီမေး လုပ်ရတာပေါ့ဗျာ။ အရောက်အများဆုံးကတော့ ရွှေတိဂုံ ဘုရားပေါ့။ ဘုရားကို ခဏခဏ ရောက်တယ်။ ဘုရားရင်ပြင်ကို ရောက်ရင် ဒေါင့်လေးဒေါင့်မှာရှိတဲ့ ဘုရားတွေကို အရင်ဖူးတယ်။ ပြီးရင် အောင်မြေမှာ ဘုရားဝတ်ပြုတယ်။ ဒါပြီးရင်တော့ အရိပ်ကောင်းကောင်းရှာပြီ ရွှေတိဂုံဘုရားကို အဝးကနေ ကြည်ညိုတယ်။ အဲဒါေ၇ွှတိ၈ုံဘုရားကို ရောက်ရင် လုပ်နေကျပုံမှန်ပဲ မပြောင်းဘူး။ ပြောင်းတာတစ်ခုကတော့ ထိုင်ပြီး ကြည်ညိုတဲ့ နေရာပဲပြောင်းတာ။
ဒီလိုနဲ့ နာဂစ်မဖြစ်ခင် ပါမစ် မကျခင်လေးမှာပေါ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ အတူတူညနေပိုင်းမှာ သွားဖြစ်တယ်။ ဒီတခါတော့ ညနေ နေကျချိန်ဆိုတော့ အရိပ်ရှာစရာမလိုဘူး။ ဘုရားကို တစ်ပတ်ပြီး တစ်ပတ် ပတ်တော့တာပေါ့။ ဘုရား အရိပ်က အေးချမ်းတယ်ဆိုတာတော့ ကျနော် မပြောလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူတိုင်းသိကြမှာပါ။
ဒီလိုနဲ့ ခြေတော်ရာရှိတဲ့ ဇရပ်ထဲကို ဝင်ပြီး ခြေတော်ရာထဲက ရေကို သောက်ပြီးပြန်အထွက်မှာ ကျနော့်သူငယ်ချင်း ဖိနပ်မရှိတော့ဘူး။ ကျတော်တို့ ဇရပ်ထဲကို ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ အထဲမှာ ဦးလေးကြီး တစ်ယောက်ပဲရှိတာ။ ခြေတော်ရာထဲမှ ရေကို သောက်နေကျတုံးမှာ အဲဒီဦးလေးကြီး ထသွားတာကိုတွေ့ လိုက်တယ်။ ဖိနပ်ကောက်သွားတာကိုလည်း တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျနော်တို့ထင်တာ သူ့ဖိနပ်သူယူတယ်လို့ပဲ ထင်တာပေါ့။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ ပါသွားတာ ကျနော်သူငယ်ချင်းဖိနပ်...............
ဖြစ်ချင်တော့ အချိန်ကလဲ ၈နာရီကျော်နေပြီ။ ဘုရားဖူးရုံသက်သက်ဆိုတော့ နှစ်ယောက်ပေါင်းလို့ ဖိနပ်တစ်ရံဖိုးက မပြည့်ပြန်ဘူး။ သူ့ခများ ဖိနပ်မပါပဲ အိမ်ကို လိုင်းကားစီးပြီး ပြန်သွားပါတယ်။
ကျနော်လည်း အပြန်လမ်းမှာ တွေးမိတာတစ်ခုကတော့ .......... .............. ............. ဪ
ဘုရားပေါ်လာပြီး ဒီလိုအလုပ်မျိုးလုပ်ဖို့ ဝန်မလေးကြတာကို ကြည့်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ အကျင့်ပျက်တဲ့ လူပေါင်းမြောက်များစွာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ မဆန်းတော့ပါဘူးလေ...............................................
Posted by Ree Noe Mann at 8:50:00 PM 17 comments:
အတွေးစိတ်ကူး ပုံရိပ်နဲ့ “ သူ ”
အချစ်ကို ရှာနေမိတဲ့ ကျနော်
တွေ့လိုက်မိတယ် “ သူ့ ” ကို
သွယ်တန်းလှပတဲ့ “ သူ့ ” လက်
ရှာနေမိတယ် “ သူ ” ရယ်
မှတ်ချက်။ ။ မလေးရှားမှာ နေတုံးက ဘယ်မှာနေလို့ ဘယ်မှာရှိမှန်းမသိတဲ့ “သူ့” ကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးထားတာပါ။
Posted by Ree Noe Mann at 10:08:00 PM 11 comments:
တစ်ခါတစ်ခါ အလုပ်လုပ်ရတာကို အရမ်းစိတ်ကုန်လာတယ်။ လုပ်လည်း မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ စိတ်ဓါတ်တွေကျတဲ့ အချိန်ဆို ပိုလို့တောင်ဆိုးသေးတယ်။ အဲ့လိုချိန်ကျရင် စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ လူတွေကို အပြစ်တင်နေမိတော့တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း လုံးဝမကျေနပ်တော့ဘူး။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်နေတာက တစ်ခြားစီဖြစ်နေတာကို။ ပညာရေး ကျပြန်တော့လည်း ပါရမီက အခြေခံ မကောင်းခဲ့တော့ သူများ တစ်ခေါက်ကျက်ရင်း ကိုယ်က သုံးခေါက်လောက် ကျက်ရတဲ့ အခြေအနေဆိုတော့ ငယ်ငယ်လေးထဲက ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ် ၊ အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ချင်တယ်လို့ တစ်ခါမှ ကြွားပြီး မပြောခဲ့ဘူး။ ဆရာဝန် ၊ အင်ဂျင်နီယာ ဘယ်သူကမဖြစ်ချင်ဘဲ ရှိပ့ါမလဲလေ။ ဖြစ်ချင်တာပေါ့။ ဒါပေသိ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိလေ..................
ဘာဖြစ်ချင်လဲ ဘာလုပ်ချင်လဲမေးလာခဲ့ ရင်လည်း ဘာလုပ်ချင်မှန်း ဘာဖြစ်ချင်မှန်း ဘာမှကို သေသေချာချာ မသိဘူးဖြစ်နေပြန်ရော။ ပြေးသာပြေးနေရတယ် ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်မှန်း မသိဘူး။ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြည့်ပြီး စိတ်အားငယ်လာတယ်။ဘယ်သူနဲ့မှလဲ မတွေ့ချင်ဘူး ဘယ်သူနဲ့မှလဲ စကားမပြောချင်တော့ဘူး။ အဲဒီ စိတ်ကိုတစ်ခါတစ်ခါ အားမရဘူး။ ပြုပြင်ချင်တယ်။ ပြုပြင်လို့မရဘူး။
ကျနော် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို အမြဲပြောတယ်။ နင် ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ ကြာရင် နင်ရူးသွားလိမ့်မယ်တဲ့။ ဒီလို စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့ အချိန်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခဏခဏတွေ့ ခဏခဏ စကားပြောတဲ့။ ဒါမှ စိတ်ထဲခံစားနေရတာ တွေကို မေ့ပျောက်လို့ရမှာတဲ့။ ဒီလိုအချိန်တွေဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေက အားဆေး တစ်ခွက်ပါတဲ့။ ကျနော် ယုံကြည်လက်ခံပါတယ်။
ဒါပင်မဲ့ ကျနော်စိတ်ထဲမှာ အပြစ်တင်သင့်တဲ့ သူတွေကို အပြစ်တင်နေမိတယ်။ သူတို့ကို အပြစ်တင်ပြီး သွားရင်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ပြီး အပြစ်တင်နေမိပါတယ်။ ကျနော်ကြောင့် သူ့တို့တွေ အပြစ်တင်ခံနေရတယ်။ ငါမကောင်းလို့ ဆိုပြီး အပြစ်တွေအားလုံးကို ကျနော့် အပေါ်ကိုပဲ ယူချလိုက်ပါတယ်။
အဲ့လို စိတ်ထဲ ဖြစ်ပြီးမှပဲ ကျနော်လည်း နေသာထိုင်သာ ရှိသွားပါတော့တယ်ဗျာ.... ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
Posted by Ree Noe Mann at 12:20:00 AM 17 comments:
တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဘာရေးရင်ကောင်းမလဲ လို့ အမြဲစဉ်းစားနေမိတယ်။ အလုပ်သွားလည်း စိတ်ကဒီကိုပဲ ရောက်နေတယ်။ ကဗျာလည်း မရေးချင်ဘူး။ စိတ်ထဲ သိပ်မကြည်လင်နေဘူးလေ။ စကားလုံးလှလှ လေးတွေက ထွက်ကျလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါနဲ့ တက်ခ်ပို့စ် တစ်ခုလောက်တော့ ရေးချင်နေမိတယ်။ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့လည်း ဘယ်ကဘယ်လို စရေးရမှန်း မသိဘူးဖြစ်နေပြန်ရော.....
ကဲ ထားလိုက်ပါတော့။ မတက်ခ်တော့ပါဘူး။ တက်ခ်နေရင်စိတ်ညစ်ကြပါအုံးမယ်။ ကိုယ့်ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကို စိတ်မညစ်စေချင်ဘူးလေ။ သူ့တိုတွေပျော်နေတာပဲ မြင်ချင်နေတာပါ။ ကဲ အကြောင်းအရာ လေးဆီ ဦးတည်အုံးမှပဲ။........................................................
ဒီလိုဗျ..... ကျနော် ၆တန်းကနေ စတွဲတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရှိတယ်။သူ့နာမည်က ဖိုးသူ။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ကျောင်းသွားတူတူ ကျောင်းပြန်တူတူ ဘယ်သွားသွားတူတူပဲ။ တော်တော်လေး ကိုခင်ပါတယ်။ ပြောပြချင်တာ သူ့ အကြောင်းမဟုတ်သေးဘူးနော်...ဆက်ဖတ်အုံး။
ကျနော်တို့ ကျောင်းသား ဘဝဆိုတော့ ဘာမှ အပူအပင် မရှိဘူး။ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် စာကျက် ဒါပဲရှိတာမဟုတ်လား။ နှစ်ဝက်လောက်ရောက်လာတော့ နှစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့ သုံးယောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့ တူရာတူရာ စုသွားကြတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်မှာတော့ အတိုးအလျှော့ မရှိ။
တစ်နေ့ကျတော့ ကျနော်တို့ စဉ်းစားမိတာတစ်ခုရှိလာတယ်။ ငါတို့ တွေ နာမည်ဝှက် ထားကြမယ်ပေါ့။ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်စဉ်းစားပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အဲလို စဉ်းစားချိန်က ဒီဇင်ဘာလ ထဲမှာ။ သူက ခရစ်စမတ် ကို သဘောကျလို့ ခရစ်တဲ့။ ကျနော်လည်းစဉ်းစားတာပေါ့ သူများတွေနဲ့ လည်း မတူချင်းပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာလည်း မရှိနိုင်တဲ့ နာမည်ဆိုပြီး ရီနို ဆိုတာကိုရွေးလိုက်တယ်။ နှစ်လုံးထဲဆို ရင်လည်း မလှပြန်ဘူး။ ဒုံတိကြီးဖြစ်နေပြန်တော့ ထက်ရွေးရပြန်တာပေါ့။
ဒါနဲ့ ကျနော်သူငယ်ချင်းက သဲ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုရွေးတယ်။ ကျနော်ကတော့ နှစ်ရက်လောက်ကြာ သွားတယ်။ ရီနိုနဲ့ လိုက်တဲ့ စကားလုံးကို လိုက်ရှာတာ။ နောက်ဆုံး တော့ မာန် ဆိုတာကို ရွေးလိုက်တယ်။ ၁၉၉၃၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ်လောက်ထဲက ဒီ ရီနိုမာန် ဆိုတာကို ကျနော်ရင်ထဲမှာ မွေးဖွားလာခဲ့ တာပါ။ ဒါပင်မဲ့ သိကြတဲ့အတိုင်း မိရိုးဖလား ဘိုးစင်ဘောင်းဆက် ခေါ်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကို ဘယ်လို့လုပ်ဖြတ်လို့ရမှာလဲ။ ဘယ်အရပ် ရောက်ရောက် ပြောင်းလဲ ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။
မိမွေးတိုင် ဖမွေးတိုင် ပေးထားတဲ့နာမည်ကို မကြိုက်လို့ မဟုတ်ရပါဘူး။ အမေပေးထားတဲ့ နာမည်ကို ရှာကြည့်ရင် ထမင်းထုပ် သိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ ရှိနိုင်မယ်မထင်လို့ပါ။ ကျနော်ကိုယ်၌က အမေပေးတဲ့ နာမည်လေးနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ပေးထားတဲ့ ဒီနာမည်လေးကိုလည်း ပါဝင်ခွင့် (ကျနော်ဘဝမှာ) ရှိစေချင်လို့ပါ။
မှတ်မှတ်ရရ ၂၀၀၉ ဧပြီလမှ စ၍ ရီနိုမာန် ဆိုတဲ့ ဘဝသစ် တစ်ခုကို မွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခုဆိုရင် ရီနိုမာန် ဆိုတဲ့ ဘဝလေးနဲ့ သူငယ်ချင်းမြှောက်မြားသွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ဒီဘဝလေးကို ထာဝရ ရင်ဝယ်ပိုက်ထားရအုံးမှာပါ။ ဒါကြောင့် ရီနိုမာန် ကို သိသော၊ ခင်သော၊ ချစ်သော ညီအစ်ကို မောင်နှမ များအားလုံးကို ဒီပို့စ်လေးနဲ့ အတူ ကျေးဇူးတင်ရှိ ပါကြောင်း ပြော ကြားရင် ...................................
ပထမတော့ မတက်ခ် တော့ ဘူးလို့ တွေးထားတာပါ။ ဒါပင်မဲ့ နာမည် လှလှလေးတွေကို စိတ်ဝင်းစားတော့ သူတို့ရဲ့ သမိုင်း အကြောင်းလေးတွေကိုလည်း သိချင်လာပါတယ်။
ဒါကြောင့် အတက်ခ် ခံရသော မောင်နှမ များ အနေနဲ့ သဘောထားကြည်ဖြူစွာနဲ့ ရေးပေးပါလို့........
နေဒေးသစ် (သစ် ကျန်သေးတယ်)
အဆိပ်ခွက် ( ပြီး)
Posted by Ree Noe Mann at 12:03:00 AM 22 comments:
အမှန်တကယ်က ၁၅ရက်နေ့က ညီမလေး မိုးခါး ရဲ့ မွေးနေ့ပါ။ အဲဒီနေ့ ကသူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကိုယ်စီ အလုပ်တွေနဲ့ ဆိုတော့ ဖုန်းနဲ့ တစ်မျိုး၊ Message နဲ့ တစ်သွယ် Wish လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၁၆ရက် စနေနေ့ မှာအားလုံးကို ဖိတ်ပြီး မကြီးရောင်ပြန် အိမ်မှာ KFC နဲ့ ဧည်ခံခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေသိ ကျနော်တို့ ရဲ့ မကြီးရောင်ပြန် ကလည်း သူမ၏မောင်လေး ညီမလေးများအတွက် ခေါက်ဆွဲသုပ်နဲ့ လ္ဘဖက်သုပ်ကို ထပ်လောင်းစီစဉ် ထားခဲ့ပါတယ်။ သိကြလား ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ ရှင်ရဲထွတ် ၊ ဖိုးဂျယ် ၊ သီဟသစ် ၊ နေးတစ် ၊ ဂျပန်ကောင်လေး ၊ မွေးနေ့ရှင် မိုးခါး ၊ အဆိပ်ခွက် ၊ ရီနိုမာန် ၊ မေတ္တာရောင်ပြန် ၊ တောင်ပေါ်သား
ကျနော်အရင်ဆုံး မကြီးတို့ အိမ်ကိုရာက်သွားပါတယ်။ ကျနော်ရောက်တဲ့ အချိန် ဘယ်သူမှ ရောက်မလာ ကြသေးဘူး ။ အားလုံးက On the way ပဲရှိကြပါတယ်။ ကျနော် ရောက်တော့ မကြီရောက်ပြန် ( ဦးရျင်ကြီး က ဒီလို ခေါ်တယ် “ ပြန်ပြန်” တဲ့) က အသုပ်အတွက် အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးလို့ လ္ဘဖက်သုပ်ဖို့ အတွက် ဂေါ်ဖီ နဲ့ ခရမ်ချည်းသီး လှီးနေပါတယ်။ ခဏနေတော့ အဆိပ်ခွက် ၊ ဂျပန်ကောင်လေး နဲ့ ကြယ်ဖြူစင် ရဲ့ ညီမလေး တို့ရောက်လာကြပါတယ်။ သူ့တို့ရောက် သိပ်မကြာလိုက်ဘူး တောင်ပေါ်သား၊ ရှင်ရဲထွတ်၊ သီဟသစ်၊ နေးတစ်၊ ဖိုးဂျယ် နဲ့ မိုးခါးတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ရောက်လာကြပါတယ်။ အားလုံး လူစုံတက်စုံပါပဲ။ မရောက်လာကြသေး တာကတော့ ကြယ်ဖြူစင် နဲ့ စနေသား။ ကြယ်ဖြူစင်လည်း သူ့မှာ အလုပ်သာလုပ်နေရတာ စိတ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ ဆီကိုရောက်နေတာအမှန်ပါ။ ခဏနေ ဖုန်းခေါ်လိုက် ခဏနေ Message ပို့လိုက် ခဏနေ ပေါင်းမြှောက်များစွာနဲ့ သူ့ခများရာက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကြည်ဖြူစင်ရောက်ပြီး အကြာခင်မှာပဲ စနေသား ကျောင်းကနေ ရောက်လာပါတယ်။
ဖိုးစိန်က ပြောတဲ့ စကတ် နဲ့ လှတယ်ဆိုတဲ့ မကြီးရောင်ပြန်
ဖိုးစိန်က ခုထိ ပန်ကန် မချသေးဘူးလို့ ဆိုတဲ့ ဂျပန်ကောင်လေး နဲ့ အဆိပ်ခွက်
နောက်ကျနေပြီး ကုန်တော့မှာပဲ လို့ စိုးရိမ်နေတဲ့ ကြယ်ဖြူစင် ၊ မိုးခါး ၊ မိုးခါးသူငယ်ချင်း ၊ ကြယ်ဖြူ ညီမလေး နဲ့ မကြီးရောင်ပြန်
B Day Card မှာ အမှတ်တရ လက်မှတ် ထိုးထားကြတယ်။
ခေါက်ဆွဲသုပ် ကိတ်မုန့် အအေး
ခေါက်ဆွဲ သုပ်ရန် ပြင်ဆင်နေပုံ
မျက်လုံးပြူး လျှာထုတ် ခေါင်းကုတ် နေတာ ဘယ်သူလို့ ထင်လဲ အဲ့ဒါ ပေါ့................ဖိုးစိန် ဆိုတာ
ကဲ ကျနော်တို့ ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲ အစီအစဉ် လေးကို စလိုက်ကြရအောင်။ မွေးနေ့ကိတ်လှီး တဲ့ အချိန်မှာ ကြယ်ဖြူစင် နဲ့ စနေသား တို့ မရောက်လာကြသေးပါဘူး။ မစခင်လေးမှာတင် ဆိုက်ပရက်ခ် က ဖိုးစိန် ရောက်လို့လှမ်းခေါ်နေပါပြီ။ သူ့ကိုပါ တစ်ခါတည်းခေါ်ပြီး Happy Birthday လေးကို စတင်လိုက်ကြပါတယ်။ ကြယ်ဖြူစင်ရောက်လာတော့ တခါ ကွန်ပြုတာ တစ်လုံးထပ်ဖွင့် မော်စကို က မောင်ငယ်ပါရောက်လာပါတယ်။ ဟိုဘက်ပြောလိုက် ဒီဘက်ပြောလိုက်၊ စားလိုက်သောက်လိုက်နဲ့ပေါ့။ တကယ့်ကို ပျော်စရာကြီးပါ။
ပြီတော့ ဘာလုပ်တယ်မှတ်လဲ (......) ရိုက်ကြတယ်လေ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းထားတဲ့ မိုးခါးနဲ့ ပန်ပန် ရယ် လေဆိပ်မှာ သူငယ်ချင်းကိုကြို စရာရှိတဲ့ ကျနော်ရယ် က မပြန်ချင်ပဲ အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ပြီး ထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။
ညီမလေး မိုခါး မွေးနေ့ ကို ဘာမှအမှတ်တရ မပေးရသေးတာနဲ့ ဒီပိုစ့်လေးနဲ့ အတူ အစ်ကို လေဆိပ်သွားရင် ပန်းတွေကိုတွေ့လို့ ရိုက်လာတဲ့ ပုံတွေကို အမှတ်တရ မွေးနေ့ လက်ဆောင်အဖြစ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ ညီမလေး မိုးခါးရေ...............................
Posted by Ree Noe Mann at 2:05:00 PM 24 comments:
စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် Danny Gokey ရေ............
အမှန်ကတော့ မင်းလည်း သီချင်းဆိုကောင်းတဲ့ အဆိုတော် တစ်ဦးပါပဲ။
သို့ပင်မဲ့ မင်းရဲ့ ပထမသီချင်းမှာ ပရိသတ်ကို လုံးဝ ဆွဲဆောင်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး
ဒုတိယ သီချင်းမှာလဲ မင်းအသံနဲ့ လိုက်ဖက်ပင်မဲ့ သိပ် မဆွဲဆောင်ခဲ့ပြန်ပါဘူး
မင်းရဲ့ Idol သမိုင်းမှာ ထွက်ရမဲ့ သုံးယောက်စရင်း မှာ မင်းနာမည် ကို တစ်ခါမှ
မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ ဘယ်သူမှလဲ မင်းကို ထင်မထားပါဘူး။ ဒိုင်းဖြစ်တဲ့ KARA ဆို
oh.. my god Oh .. my god ဆိုပြီး ဘုရားတနေတော့တာပဲ။ သူမလည်း တွေး
ထားမှာပဲ Adam လောက် မကြိုက်ပင်မဲ့ Final တော့မင်းကို ပါဝင်စေချင်မှာပေါ့။
ဘာပဲပြောပြော American Idol (8) ရဲ့ အမှတ်တရမှတ်တိုင်လေးပါပဲ။
American Idol (8) ရဲ့ နောက်ဆုံး တစ်ပတ် ဖြစ်တဲ့ Final ကို နာမည်ကြီး တွေစုဝေးရာ
ဖြစ်တဲ့ Hollywood မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ USA မှာဆိုရင်တော့ အင်္ဂါနေ့ မှာ
ပြိုင်ပွဲ ဝင်ရမှာဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ ဘယ်သူများ သရဖူဆောင်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူမှာ ဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဓဟူး နေ့ နဲ့ ကြာသပတေး နေ့ တွေမှာ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး မလေးရှား မှာဆိုရင်တော့ ကြာသပတေး နေ့ နဲ့ သောကြာနေ့ တွေမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Adam နဲ့ ယှဉ်ရင်း Kris က ဘယ်လိုမှ မနိုင်ဘူးဆိုတာ အသိသာကြီးပါ။ ဒါပင်မဲ့ Danny နဲ့ Kris ယှဉ်ရင် Danny သာ Final တက်မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့ ချိန်မှာ Kris က ပထမဆုံး Final ကို ပန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Kris သည်လည်း Adam ရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ဖက် ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့တွေ ထိုင်စောင့် ကြည့်ယုံ ကလွဲပြီး ဘာမှ မတက်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့် ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းများ ကို နောက်ဆုံး Final Show ကို ကြည့်စေချင်လို့ ခုလိုမျိုး အသိပေးရခြင်းပါဗျာ။ဂီတ ကို နှစ်သက်သူများ ကျေနပ်နိုင်မယ်လို့ မျောလင့်မိပါတယ်။
Posted by Ree Noe Mann at 9:05:00 PM 8 comments:
Posted by Ree Noe Mann at 1:30:00 AM 23 comments:
ငါ တစ်ယောက်တည်း လျှောက်နေတယ်
မင်းကိုငါ... ချစ်နေဆဲ။ ။
ကဗျာပိုင်ရှင် - အဖြူရောင်နက်သမီး
Posted by Ree Noe Mann at 12:25:00 PM7comments:
မ .... ညညဆို ကျွန်တော့်အိပ်မက်တွေ အထီးကျန် (အပိုင်း -၂ ဇာတ်သိမ်း)
မ ကျွန်တော့်ကို နားမလည်ခဲ့ဘူး။
နာကြည်းစွာနှင့် သူ တွေးသည်။ အနည်းဆုံးတော့ ကျွန်တော် မကို ဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုတာ နားမလည်ဘူး။ သို့သော်လည်း အတွေးသည် အတွေးသာ ဖြစ်၏။ သူ့ရင်ထဲတွင် မည်သို့ခံစားရသည်ကို နှုတ်က ဖွင့်ပြောရန် အတွက်ကိုတော့ အမြဲတမ်း ၀န်လေးတတ်သည်။ မ နှင့်ပတ်သက်ရင် အရှုံးဟူသော စကားကို မေ့လျော့ထားခဲ့ရတာ ကာလ မည်မျှကြာပြီလဲ။ အခုမှ မဟုတ်ဘူး။
သူ ထိုင်တတ်သော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့မှ ခေါင်းငုံ့ ဖြတ်လျှောက်သွားတတ်သည့် ငယ်နုသော အသက်အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် တမင်ကြီးရင့်ပုံဖမ်း ထားသော မမတစ်ယောက်ကို စတွေ့ကတည်းကပေါ့။ ထိုစဉ်ကတော့ သူသည် မ ပြောတတ်သည့် တန်ဖိုးဟူသောစကားလုံးကို ကောင်းစွာ နားမလည်သော ပေါ့သွမ်းသွမ်း ကောင်လေးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့သည်။ (အခု အချိန်မှာ သူနားလည်သည်ကလည်း မ သူ့ဘ၀တွင် ရှိခြင်းနှင့် မရှိခြင်း၏ ကွဲပြား ခြားနားသော တန်ဖိုးသာဖြစ်သည်)
အချစ်နှင့် ပတ်သက်သော ဝေဒနာခံစားရသူများကို လှောင်ပြောင်တတ်စဉ်ကတော့ ထိုဝဋ်သည် ကြီးစွာလည်လိမ့်မည်ဟု သူ မတွေးခဲ့ဖူးတာ သေချာ၏။ ဘယ်လို မိန်းကလေးနှင့်မှ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးကိုမှ ရင်မခုန်ခဲ့ဖူးသော သူသည် မ မျက်နှာလေးကို တစ်ရက်မမြင်ရရင် မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်သော အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင် ပြန်အံ့သြယူရသည်။ မ ဘေးတွင် ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေသည့် သူ့ထက်လည်း အစစအရာရာ ပြည့်စုံသူများကြားမှ သူ့ကို ရွေးချယ်ခဲ့သည့် အတွက်တော့ မမကို အမြဲ ကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါသည်။ မမနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခွင့်ရခဲ့သော ကာလတိုကလေးသည် သူ့ဘ၀၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ မနှင့် သူ့ကြားက အတွေးခေါ် အယူအဆတွေ သည်မျှဆန့်ကျင်နေလိမ့်မည်ဟု မသိသေးခင်အချိန်ထိပေါ့။
သူ ဆံပင်အရှည်ထားတာ မ မကြိုက်။ သူကြည့်သော စိတ်ကူးယဉ် အချစ် ဇာတ်လမ်းများကို မ မကြိုက် (မ က နည်းနည်းမှ စိတ်ကူး မယဉ်တတ်သူ ဖြစ်သည်) Simple Plan ကို မကြိုက်။ မိုခကို မကြိုက်။ ကျွန်တော့်ကိုပင် မမ ကြိုက်ပါရဲ့လား။ အတူ လမ်းသွားရင်း မ လက်ကလေးကို ကိုင်ထား ခွင့်မရသည့်အခါ ကသိ ကအောက် ဖြစ်ရသည့် ခံစားချက်ကို မမ နားလည်မည် မဟုတ်။
သူနှင့် မ အကြောင်းကို မသိသော မ သူငယ်ချင်းများ နှင့် လမ်းမှာဆုံစဉ်က မောင်လေးပါဟုပြောပြီး မိတ်ဆက် ပေးခဲ့တော့ သူ့ရင်ထဲတွင် ဘယ်လို ခံစားခဲ့ရသည်ကိုလည်း မ ဘယ်တော့မှ လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်။ ပြောမိလျှင်ပင် သူက အသေးအမွှား လေးတွေကိုပင် ပြဿနာရှာ တတ်သူ၊ အရေးမပါသည့် အရာတွေကို ရှေ့တန်းတင် တတ်သူဖြစ်ရပြန်သည်။ တစ်ခါတလေတော့ သူ့ကို မ ဘာကြောင့်များ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသနည်းဟု နားမလည်နိုင် ဖြစ်ရတတ်သည်။ သူ့ထံတွင် မ နှင့် မ သူငယ်ချင်းတွေ အများစု ရှေ့တန်းတင်ကြသော ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူးတွေ မရှိ။ လေးစားလောက်သော တည်ငြိမ်မှု မရှိ။ သူ့မှာရှိသည်က မကို သိပ်ချစ်သည့် အချစ်တစ်ခုတည်း။ အဲဒီ အချစ်အတွက်နဲ့ပဲ ကျွန်တော့်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာလို့တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်မကြီးရဲတာ အမှန်ပါမမ။ သူငယ် ချင်းများ၏ တိုက်တွန်းမှုဖြင့် စကော်လာတစ်ခုကို လျှောက်ခဲ့စဉ်က မ ကို အသိပေးဖို့ သူ စိတ်ကူးမရခဲ့ပေ။ ဘယ် အသိပေးရဲပါ့မလဲ။ ရရင် တော်သေးရဲ့။
မရခဲ့လျှင် တုံ့ပြန်မည့် စကားလုံးများ၏ ပြင်းထန် စူးရှမှုကို သူ ကြိုသိသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ သူ အောင်သွားတော့လည်း မ ကို အသိမပေးဖြစ်သေး။ အဓိက ကတော့ မ နှင့် နှစ်နှစ်တာ ကာလရှည်တစ်ခုလုံး ခွဲနိုင်လိမ့်မည်ဟု သူ့ကိုယ်သူ မယုံကြည်တာကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်ကလေးသည် ကြီး မားသော ပြဿနာတစ်ခု အဖြစ် မ နှင့်ကျွန်တော့်ဘ၀ ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် လောင်ကျွမ်းစေလိမ့်မည်ဟု ကျွန် တော် ဘယ်တွေးမိခဲ့ပါ့မလဲ မ ရယ်။
မမတို့ မိန်းမတွေရဲ့ ရှုပ်ထွေးဆန်းပြားတဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကို ကျွန်တော် ဘယ်နားလည်ခဲ့ပါမလဲ။
ဟု သူမ မေးသောအခါ မောင်ပြုံးသည်။
ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိသောအခါ ပြုံးသော အပြုံးဖြစ်၏။ ပါးချိုင့်ကလေး တစ်ဖက် ခွက်ဝင်သွားကာ သွားတန်းကလေးများ လက်ခနဲပေါ်လာသည့် ချစ်စရာ ကောင်းလှသော မောင့်အပြုံးတွင် သူမဒေါသများ အကြိမ် များစွာပျော်ဝင်ခဲ့ဖူးသည်။ ဒီ တစ်ခါတော့ မရတော့ဘူး မောင်။
"အင်း... ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က အားလုံးပြီးတော့မှ မ ကို အသိပေးမလို့ စီစဉ်ထားတာ"
"တော်စမ်းပါ။ ဒီ ကိစ္စက ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖို့ လက်မှတ်ကြိုဝယ်ထားတဲ့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူး မောင်ရဲ့။ ဘ၀တစ်ခုလုံးရဲ့ အပြောင်းအလဲ။ ကိုယ့်ကို နည်းနည်းပါးပါး တိုင်ပင်ဖို့ စိတ်ကူးမရဘူးလား"
"ဟာကွာ မကလည်း၊ မ မတားလောက်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သိတာပဲ"
ကြည့်စမ်း၊ မောင် သူမ ကို သိပ်အထင်သေးခဲ့ပါလား။
ငွေကြေးနဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်တွေ ကလွဲလို့ ချစ်သူနဲ့ နှစ်ကာလ ရှည်ခွဲရမည့် အရေးကိုပင် နည်းနည်းမှထည့်မတွက် လောက်ဘူးလို့ တစ်ထစ်ချ ယုံကြည် ထားခဲ့သည်လား။
"မင်းကို မတားဘူးဆိုတာတော့ သေချာတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ် အသိပေးသင့်တယ်လို့ ပြောနေတာ။ ကိုယ့်ရည်းစား ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ဘေးသူစိမ်းလာပြောမှ သိရတဲ့အဖြစ်ဟာ ဘယ်လောက် ရင်နာစရာ ကောင်းသလဲဆိုတာ မင်းသိရဲ့လား။ ပြောပြရင်လည်း နားလည်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ကပဲ အပြစ်မရှိ အပြစ် ရှာရစ်တတ်တယ်လို့ အစွပ်စွဲခံ ရဦးမယ်။ ဒီမှာ မင်းရှေ့မှာ ရပ်နေတဲ့မိန်းမဟာ မင်းပြောလာမယ့် Surprise ဆိုတဲ့အသံမှာ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရ မှန်းမသိဘဲ အူကြောင်ကြောင် ကျန်ခဲ့မယ့် သူမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မှတ်ထား လိုက်စမ်း ညီသစ်ဆင်း"
"မ ဘာဖြစ်လို့ ဒီ လောက်တောင် ဒေါသကြီး နေရတာလဲ။ ကျွန်တော် မ ကို ဖွင့်မပြောဖြစ်သေးတာ Surprise လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ ပြောဖို့ မရဲသေးလို့ အဲဒီ လောက်အချိန်အကြာကြီး မနဲ့ မခွဲနိုင်လို့။ ကျွန်တော်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘာလို့ အဲဒီလောက် အရှုံးအနိုင် တွက်ရတာလဲ။ ကျွန်တော့်ကို မချစ်ဘူးလား"
မောင်က သူမကို ထွေးပွေ့နှစ်သိမ့်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း ချက်ချင်းပင် ရုန်းထွက်ပစ်လိုက်၏။ မောင် မျက်နှာကလေး ငယ်သွားတော့ အနည်းငယ် သနားသွားသော်လည်း မောင် သူမကို ဖုံးကွယ်ထားသည့် ကိစ္စကို လာပြောစဉ်က သူမသူငယ်ချင်း၏ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ ချိတ်တွယ်ထားသည့် သရော်မော်ကား အပြုံးကို ပြန်သတိရသွားတော့ သူမသွေးများဆူပွက် လာကြပြန်သည်။
"ကိုယ်ပြောဖူးသလား၊ မင်းကိုချစ်ပါတယ်လို့ ကိုယ် ပြောခဲ့ဖူးသလား"
အသားအရေ ပါးလျား ကြည်လင်သော မောင့်မျက်နှာတွင် ဖြတ်ရိုက်ခံလိုက်ရသလို နာကျင်ရိပ်ဖြင့် နီရဲသွားတော့ သူမစကားလွန်သွားပြီဟု ရိပ်မိသွားသည်။ မောင်က သူမမျက်နှာကို မယုံ နိုင်သလိုကြည့်၏။
အို... မဟုတ်ဘူး မောင် ရယ်။ ကိုယ် မပြောသင့်ဘူး နော်။ အသံမထွက်သော ရင်ထဲက စကားတွေကို မောင် ဘယ်ကြားပါ့မလဲ။ လှည့်ထွက်သွားသော မောင့်ကို စကားတစ်ခွန်ဖြင့်ဖြစ်စေ တောင်းပန်သင့်သော်လည်း သူမနှုတ်ခမ်းများ တင်းတင်း စေ့လျက်သာ ရှိနေခဲ့သည်။ မခွဲနိုင်ဘူးတဲ့လား မောင်။ ကိုယ့်ကို မခွဲနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ မောင်ကပဲ စကားလေး တစ်ခွန်းအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ထားခဲ့ရက်သလား။
မင်းကိုချစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးသလားတဲ့။ ဟုတ် မှန်ပေမယ့် သိပ်ရက်စက်တဲ့ စကားဖြစ်ခဲ့သည်။ မ ပြောတာ သိပ်မှန်ပါသည်။ မ အရယ်အပြုံး၊ စကားတွေကို သာယာနေသမျှ အဲဒါတွေရဲ့ အဖြေကို အချစ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ခဲ့သည်။ အချစ်စစ်ဆိုတာ စကားလုံးတွေနဲ့ ဖော်ကျူးစရာ မလိုပါဘူးလေလို့ ကျွန်တော် ယုံခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတော့...။ နောက်ဆုံးတော့ စကားလုံး တစ်လုံးအကြည့် တစ်ချက်နဲ့တောင် မကို ပြန်လည်မချေပရဲတဲ့ ကျွန်တော် ဟိုးအဝေး ကြီးကိုလွင့်ခဲ့သည်။ တွေးတောရင်းဖြင့် ခေါင်းကို စိတ်ပျက်ညည်းညူစွာ ခါယမ်း ပစ်လိုက်သောအခါ မက သူ့ကို နားမလည်နိုင်သလိုကြည့်၏။ နှစ်ပေါင်းများစွာ သူ့ နှလုံးသား တစ်ခုလုံးတွင် နေရာ အပြည့်ယူထားနိုင်ခဲ့သော မိန်းမတစ်ယောက် အဖြစ် ကျေနပ်စွာ လက်ခံနိုင် လောက်အောင် မက လှပဆဲ ဖြစ်သည်။ ကော့တေးခွက် ပေါ်တွင် တင်ထားလက်စ ဖြစ်သော သံပရာသီးစိတ်ကလေးကို လက်လှမ်းမိသော အခါ မက တားသည်။
"ရပါတယ် ကိုယ် မသောက်ချင်သေးဘူး"
ရှေ့မျက်နှာစာမှ မြင်နေရသော စားပွဲထက်သို့သာ စိုက်ကြည့်လျက် ပြောစရာစကား များရှားပါးသွားပြန်သည်။ တစ်ခုခုပြောရန် အားယူလိုက်တိုင်း တင်းတင်းစေ့ထားသော မ နှုတ်ခမ်းများကို မြင်ရသောအခါ စကားလုံးများ ပျောက်ဆုံးကုန်သည်။ မ ကို ပြောပြချင်သော စကားများ ရင်ထဲတွင် ရှိသော်လည်း ဘယ်နေရာက စရမည်မှန်း မသိအောင် ပြည့်ကျပ်နေသည်။
သူ့အား ပြန်လည်မေး ခွန်းထုတ်သည်ကို မကြိုက်ဟန်ဖြင့် မျက်မှောင်ကြုတ် ကြည့်သောဟန်သည် ဆရာမ တစ်ယောက်အဖြစ် အသား ကျခဲ့သော မ၏ ကိုယ်ပိုင်ဟန် ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ကျောင်းသား တစ်ယောက်မှာလည်း မရှင်းတဲ့ သင်ခန်းစာ တွေအတွက် ပြန်ပြီးမေးခွန်း ထုတ်ခွင့်ရှိတာပဲမဟုတ်လား။ သူ၏ ကလန်ကဆန်လုပ်လိုသော စိတ်ဓာတ်က ပြန်ပြောရန် တွန်းအားပေးသော်လည်း မ မျက်နှာပေါ်မှ အပြုံးကို ခဏဖြစ်ဖြစ် ထပ်မြင်ချင် သေးသော စိတ်ဓာတ်က အနိုင် ရသွားသည်။
"မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် တကယ်မရှင်းလို့ပါ"
"အဲဒီလိုဆိုရင်တော့ တစ်ခုကလွဲလို့ အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်"
သူ၏ ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက် နားလည်ဟန်ဖြင့် မ ပြုံးပြန်သည်။ ဘာ ဟန်ဆောင်မှုမှ မပါဘဲ ပြုံးရယ်လိုက်လျှင် အလွန်လှသော မရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေက ဘာကြောင့်များ အမြဲတမ်း တင်းစေ့ထားခဲ့ပါသလဲ မမ။
ဖန်ခွက်ကို ကိုင်ကာ လက်သည်းနှင့် အကြောင်းမဲ့ ကုတ်ခြစ်နေသော မ လက်သွယ်သွယ်ကလေးတွေကို ဆွဲယူ နမ်းရှိုက်ပစ်လိုက်ချင် စိတ်ကိုချုပ်တည်း လိုက်သော အခါ သူ့ရင်ထဲမွန်းကျပ်လာ သည်။ ဒီဝေဒနာဟာ မ နဲ့ ပတ်သက်မှ ပထမဆုံးခံစား ဖူးသောဝေဒနာဖြစ်သည်။ ချစ်သူ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး မ လက်ကလေးကို လူလစ်ရင် ဆုပ်ကိုင်ထားခွင့်မှအပ ဘာမှမရခဲ့သော သူ့ကို သူငယ်ချင်းများက လှောင်ပြောင် ရယ်မောတတ်သည်ပဲ။ ဈေးသွားရန် အဖော်လိုသည့်အခါ၊ ညဥ့်နက်သန်းခေါင် ကျူရှင်မှ ပြန်ရသည့် အခါတွေမှာ ဖုန်းဆက် ခေါ်လိုက်တိုင်း တစ်ခေါက် တစ်ခါမှမငြင်းမိဘဲ အမြဲတမ်းရောက်လာခဲ့တဲ့ ကောင်ကို မ နှလုံးသားရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ မ ထားခဲ့ပါသလဲ။ ဘယ်အခွင့်အရေးမှ မတောင်းဆိုခဲ့ဖူးဘဲ မ ပြောသမျှ အမြဲခေါင်းညိတ် နားလည်ပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဒီလောက် ရက်စက်ခဲ့တဲ့ မ ကို နည်းနည်းလေးမှ မုန်းမေ့လို့မရတဲ့ အဖြစ်ဟာ ဘယ်လောက် ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်ပါလဲ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ... ဒီလိုနဲ့ပဲ မရယ်...။
"အိုကေ၊ ဘာမှပြော စရာမရှိရင် ကိုယ်ပြန်တော့မယ်"
မှန်တံခါး အပြင်ဘက်ရှိ မြင်ကွင်း အလွန်ေ၀၀ါးနေတာ မိုးတွေ သည်းနေသောကြောင့်ပဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
တိုက်ဆိုင်လို့ မဟုတ် နှစ်သက်လို့ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈ ရွှေအမြုတေး မဂ္ဂဇင်းကနေ ဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Ree Noe Mann at 11:45:00 PM 8 comments:
မ .... ညညဆို ကျွန်တော့်အိပ်မက်တွေ အထီးကျန် (အပိုင်း -၁)
စာရေးဆရာ ဝေဟံ ရေးသော ဝတ္တုတိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နှစ်သက်မိ၍ ပြန်လည်ခံစား ဖော်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အမြှုပ်တွေ အပေါ်က ဖုံးလွှမ်းနေသဖြင့်သာ အငွေ့ မထွက်ဟန်ရှိသော ကော်ဖီတစ်ခွက်သည် သူမရှေ့တွင် (သူမလိုပင်) တိတ်ဆိတ်စွာ ရှိနေသည်။ အပြင်မှာ မိုးတွေ သည်းနေသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ အနည်းငယ် စိုစွတ်နေသော အ၀တ်အစားများကြောင့် လည်းကောင်း၊ ချမ်းစိမ့် လာသော်လည်း ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ကော်ဖီကို မသောက် ဖြစ်သေးချေ။ ဘာကိုများ စောင့်စားမိပါလိမ့်။ ကော်ဖီသောက်ခြင်း ဆိုတာဟာ သူမ တစ်ယောက်တည်း ဖြင့်ပြီးမြောက် နိုင်သောအရာပဲ မဟုတ်လား။
အမြဲတမ်းလိုလို နောက်ကျတတ်သော ယောက်ျား တစ်ယောက်ကို ဘာကြောင့်များ မိုက်မဲစွာ စောင့်နေမိပါသလဲ။ ဟင့်အင်း။ မောင့်ကို ဒီနေ့တွေ့ရမှ ဖြစ်မည်။ မောင် မရှိတဲ့ ကာလများအတွင်း မောင့်ကို သူမ မည်မျှ မြတ်နိုးခဲ့ကြောင်း သေချာလာခဲ့သည်။ မောင့် မျက်နှာလေးကို စိုက်ကြည့်ရင်းပြောဖို့ ရည်ရွယ်ထား သောစကားများစွာ သူမရင်ထဲမှာ ရှိပါသည်။ ဒါတွေဟာ သူမ ဆီပြန်လာဖို့ ဆွဲဆောင်တာမဟုတ်ဘဲ ရင်ထဲက စကားတွေသာ ဖြစ်ကြောင်း မောင် ယုံကြည်မယ် ဆိုရင်ပေါ့လေ။ တစ်ချိန်တုန်းကတော့ သူမ အမြဲလို ထိုင်တတ်သော ကော်ဖီဆိုင်တွင် သူမရှေ့မှ အမြဲလို နေရာယူပြီး စောင့်ကြည့်တတ်သော မျက်ဝန်းညို ညိုလေးများကို ဟက်ဟက် ပက်ပက် ရယ်မော ပစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို ရှေ့ချရင်း စာရေး စာဖတ်လုပ်ကာ စိတ်ထွက်ပေါက်ကို ရှာတတ်ကာစ အချိန်တွေတုန်းကတော့ ထိုမျက်ဝန်း ကလေးများသည် သူမကို မြတ်နိုးရိပ်များ တစ်ဖိတ်ဖိတ်လက် နေခဲ့ပါသည်။ ဆယ်စုနှစ် ထက်ဝက်စာ ကာလကြာပြီး နောက် ထိုမျက်ဝန်းလေးတွေ သူမအနားမှာ မရှိတော့တာ ကတော့ သင်္ခါရတရားပဲ ဖြစ်သည်။ ချိန်းထားသည့် အချိန်ကို ဆယ်မိနစ်ခန့် လွန်သွားသောအခါ မစောင့်သင့်တော့ပြီဟု စိတ်မြန်လက်မြန် ဆုံးဖြတ်ကာ ပြန်ရန် မတ်တတ် ထရပ်လိုက်လေသည်။ (မောင့်ကို သိပ်ချစ်သည်မှာ မှန်သော်လည်း အရှုံးအနိုင် တွက်တတ်တဲ့စိတ်က ကိုယ့် ရင်ထဲမှာ ရှိနေတုန်းပဲ)
ထိုစဉ်မှာပဲ သူမနောက်မှ ခပ်သုတ်သုတ် ၀င်လာသော ခြေသံနှင့်အတူ ရင်းနှီးပြီးသား မောင့်ကိုယ်နံ့ကလေးကို ရမိသည်။ စောစောက စိတ်တိုထားသော အရှိန်ဖြင့် မျက်နှာကို တင်းထားမိသော်လည်း မောင်နှင့် သူမကြားတွင် ထိုသို့သော ပတ်သက်မှုမျိုး မရှိတော့သည်ကို ရုတ်ချည်းသတိရသွားလေသည်။
သူမနှင့် တွေ့ဆုံလျှင် ပြောမည်ဟု ကြိုတင် စဉ်းစားထားသော စကားလုံးများသည် အကြိမ်ကြိမ် ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးသော အကြည့်စူးစူးတို့တွင် ကျဆုံး သွားပြန်သည်။ ခေါင်းမော့ကာ သူမ မျက်လုံးများထံသို့ ရင်ဆိုင်ရန် အားယူမိသော်လည်း တကယ်တမ်းတော့ သူ့ရှေ့တည့်တည့်မှ စားပွဲဆီသို့သာ စိုက်ကြည့်နေဖြစ်သည်။ နဖူးဆီသို့ ၀ဲကျနေသော ဆံပင်များကြားမှ ခိုးကြည့်မိသောအခါ တင်းတင်းစေ့ထားသော ဆိုးဆေးမတင်သည့် နှုတ်ခမ်းပါး တစ်စုံကို ဦးစွာ မြင်ရ၏။ အိပ်မက်ထဲထိ လိုက်ပါ နှောင့်ယှက်ခဲ့သော မ၏ နှုတ်ခမ်းတို့သည်သူ့ဘ၀ တစ်ခုလုံးကို ဆုတ်ဖြဲပစ်နိုင်သော စကားလုံးတို့ တည်နေရာလည်း ဖြစ်သေးသည်။
"ဘာလို့ နောက်ကျ နေတာလဲ"
ပထမဆုံး စပြောလာသော စကားမှာပင် မမ ဘာမှ မပြောင်းလဲသေးပါလားဟု သူ သေချာသွားတော့သည်။
ပြောနေကျ ရိုရိုကျိုးကျိုး အသံပါမသွားစေရန် အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းသေးသော်လည်း မအောင်မြင်ကြောင်း သူသိသည်။ ဒါပဲပေါ့။ ဝေးကွာနေသော ကာလရှည် တစ်လျှောက်လုံး ဘယ်မိန်းမကိုမှ စိတ်ကစားလို့ မရအောင် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့သော သီတာမေ ရဲ့အစွမ်းတွေ။ အို... ဒါတွေကို ပြောပြလို့လည်း ယုံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မမရဲ့မျက်လုံး တွေက သူ့ကိုကြည့်သမျှ သံသယတွေ အမြဲ ဖုံးလွှမ်း ထားတာပဲ မဟုတ်လား။
"ကျွန်တော် ပြုံးခွင့် မရှိဘူးလား"
ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ်လာသော မခံချင်စိတ်ဖြင့် ပြန်ဖြေလိုက်မိသော်လည်း ဒီလို မပြောသင့်ဘူး ထင်သည်။ သူ့ အထင်မှန်ကြောင်းကို မမပြုံးသော အပြုံးတွင် တွေ့ရလေသည်။
နှုတ်ခမ်းပါးလေး တွန့်ကွေးသွားရုံမျှ အပြုံးဖြစ်သော်လည်း ခါးသီးသောအဓိပ္ပာယ် များစွာပါဝင်ကြောင်း သူ နားလည်၏။ မင်း မရင့်ကျက်သေးပါလားဟု မှတ် ချက်ပြုလိုဟန်ရှိသော၊ အရမ်း ကလေးဆန်ပါလားဟု လှောင်ပြောင်သရော်ရိပ် အပြည့်ရှိသော ထိုအပြုံးကို သူမနှင့် ချစ်သူဘ၀ကတည်းက ကြိမ်ဖန်များစွာ လက်ခံ ရရှိဖူးသည်။ ချစ်သူဟူသော အသုံးအနှုန်းကို သတိပြုမိ သွားသောအခါ သူ့ရင်ထဲတွင် စူးစူးရှရှ နာကျင်လာသည်။ ဒီအသုံးအနှုန်းဟာ ကျွန်တော် တစ်ဖက်သတ် သုံးစွဲနေခဲ့ရတာများလား။ ကျွန်တော့်ကို တကယ်ပဲ မချစ်ခဲ့ဘူးလား မမရယ်။ အတွေးများစွာဖြင့် သူမကို ကူကယ်ရာမဲ့စွာ လှမ်းကြည့်မိတော့ သူ့ကို လုံးဝ စိတ်ဝင်စားဟန် မရှိဘဲ မီနူးထဲမှာ တစ်စုံတစ်ခုကို ရှာဖွေနေသည်ကို တွေ့ရ၏။ နှစ်ပေါင်းများစွာ မိန်းမတစ်ယောက်ရှေ့ ဒူးထောက်နေ ခဲ့ရလောက်အောင် ညံ့ဖျင်းလှသော သူ့ကိုယ်သူ ပထမဆုံး အကြိမ် မုန်းတီးမိတော့သည်။
သူမရှေ့တွင် အပြစ်ရှိ သော ကလေးငယ် တစ်ယောက်လို တွန့်ဆုတ်ဟန်ရှိသော မောင့်ကို မြင်ရသော အခါ စောင့်ဆိုင်းရစဉ်က ခံစားရသော ဒေါသများသည် လွယ်ကူစွာ ပျော်ဝင် သွားကြသည်။ တကယ်ဆို အပြစ်ရှိတာ ကိုယ်ပါ မောင်ရယ်။ ကိုယ် မှားယွင်းခဲ့တာ၊ တွေဝေခဲ့တာ။
ပတ်ဝန်းကျင်ကဆိုတဲ့ စကားတွေကို ယိုင်နဲ့လွယ်လွန်းခဲ့တာ။ တကယ်ဆို ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် တည်ဆောက်ရမယ့် ဘ၀ဟာ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တာ မဟုတ်လား။ ဘာကြောင့် တခြားလူ အမြင်ကို ဂရုစိုက်ရမှာလဲ။
မောင်နှင့် ဝေးကွာနေစဉ် ကာလတစ်လျှောက်လုံး ရင်ထဲတွင် ပဲ့တင်ထပ်မြဲ စကားတို့သည် အသံအဖြစ် စီးဆင်းရန်အတွက်မူ နှောင့်နှေးလျက်ရှိ၏။ ပြောစရာ စကားတစ်ခုကိုမှ ရှာမရသော အခါ စားပွဲပေါ်က မီနူးကို ဖွင့်မိသည်။ တစ်ခုခုသောက် ရရင် ကောင်းမှာပဲ။
Tequilla Sunrise, Black Russian, Screw Driver ဟင့်အင်း ပြင်းလွန်း တယ်။
"Gin Fizz တစ်ခွက်"
သူမ တစ်စုံတစ်ရာ ပြောရန်ပြင်တော့ သူမ ဘာပြောမည်ကို ကြိုတင် ရိပ်မိဟန်ရှိသော မောင်က ၀င်ပြောသည်။
"သံပရာသီးကို အစိတ်လိုက်ပဲ ယူခဲ့"
မတွေ့ရတာကြာပြီ ဖြစ်သော်လည်း သူမအကြိုက်ကို မောင် မှတ်မိဆဲပါလားဟု ကြည်နူးစွာ မောင့်ကိုကြည့်တော့ မောင် ပြုံးသည်။
"ကျွန်တော် ဟိုမှာ တစ်ယောက်တည်းနေတုန်းက မကြာခဏ သောက်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စပ်သောက်တာဆိုတော့..."
ရှေ့ဆက်ပြောရမည့် စကားကို ပြောသင့်မပြောသင့် ချိန်ဆနေဟန်ရှိ၏။
"မ စပ်သလောက် မကောင်းဘူး"
ဒီလိုအပြောတွေ ဒီလို အပြုံးတွေနဲ့ပဲ မောင် သူမကို မချစ်ဘဲ မနေနိုင်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာပေါ့။ သူမ ကြိုတင် စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သော ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီး ကိုယ့်ထက် ပညာတတ် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ယောက်ျား တစ်ယောက်၏ ပုံရိပ်သည် သူမထက် အသက်လေးနှစ်မျှ ငယ်သော သာမန်မေဂျာတစ် ခုမှကောင်လေးတစ်ယောက် ဖြစ်သော မောင်နှင့်တွေ့သော အခါ လွင့်ပြယ်စပြု၏။
ယောက်ျား တစ်ယောက်ကို တော်ရုံနှင့် အထင်မကြီး တတ်သောသူမ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှ သူမ သူငယ်ချင်းများကပင် သူမနောက်မှ အမြဲလို လိုက်ပါနေတတ် သောမောင့်ကိုမြင်လျှင် ချစ်စရာလေးဟု မှတ်ချက်ပြုကြတော့ သူမ ကိုယ်တိုင်လည်း မောင့်ကို သိပ်ချစ်မိနေကြောင်း ၀န်ခံရတော့သည်။
ဦးနှောက်နှင့် စဉ်းစားလျှင် ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာမမြင်သော မောင့်ကို အချစ်တစ်ခုတည်းနှင့် ဇွတ်မှိတ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းသည် သူမ၏ အကြီးဆုံးအမှားဖြစ် ဟန်တူသည်။ လေးနှစ် ဟူသော အသက်ကွာဟမှုသည် တချို့သော လူတွေအတွက် အကြောင်းမဟုတ်သော်လည်း ရှိရင်းစွဲ အသက်အရွယ်ထက် လူကြီးဆန်ချင်သော သူမနှင့် ဘယ်တော့မှ ရင့်ကျက်သည့်ပုံ မပေါက်သော မောင်တို့တွင်တော့ ကြီးမားသောပြဿနာ ဖြစ်သည်။ မောင့်ကို လက်ခံ လိုက်မိခြင်းအတွက် ကိုယ်ရင်ဆိုင်ရသော ဖိအားတွေကို မောင် ကိုယ်ချင်းစာပါရဲ့လား။ ကလေးကို မုန့်ပေးကြိုက်တာဟု စသလိုလိုနှင့် အတည်ပြောကြသော စကားတင်းများ၊ အပြစ်တင်ငြူစူသော မျက်လုံးများ လက်ညှိုးများ သူမ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရမလဲဆိုတာ မောင်တွေးမိပါ့မလား။ အို... တကယ်တော့ မောင် သူမကို နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။
Posted by Ree Noe Mann at 12:18:00 AM9comments:
အင်း .....ဒီနှစ်တော့ ဆယ်တန်းအောင်မှကို ဖြစ်မယ်။ မအောင် ရင်လည်း အမေက ပြောတယ် ကျောင်းဆက် မထားတော့ဘူးတဲ့။ မအောင်ခဲ့ရင် ကိုယ့်စရိတ် နဲ့ကိုယ် ကျောင်းတက်ရမယ်နဲ့တူတယ်။ ဒါပင်မဲ့ ဘယ်မိဘက ပစ်ထားမှာလဲ။ အောင်စေချင်လို့ ဒီလိုမျိုးပြောတာ နေမှာပေါ့။ အဲ့ဒီအချိန်တုံးက အဲ့လိုမျိုးလုံးဝ မတွေးမိဘူးလေ။ ခုမှ.........။
ကျွန်တော်က ဆယ်တန်းပထမနှစ်ကို ကျလို့ ဒုတိယနှစ်ကို အဖေတာဝန်ကျတဲ့ ပင်းလောင်းမှာပြောင်းတက်တာ။ ဆယ်တန်း ဒုတိယနှစ် ဆိုတော့ ကျောင်းဖြေပဲ ရှိသေးတာပေါ့။ ကျောင်းတက်လိုက်၊ ကျူရှင်တက်လိုက်နဲ့ပေါ့။ Mon To Fri မနက်အစောကြီးက စထွက်တာ ညမှပြန်ရောက်တယ်။ ဒါစာသင်နှစ် တစ်နှစ်လုံးဆိုပါတော့။
ပင်လောင်းမှာက အရမ်းအေးတာ။ ဆောင်းတွင်းဆို ရေတောင်းခဲတယ်။ ပင်လောင်းအအေးက တောင်ကြီးထက် ကိုအေးတာ။ မယုံရင် တောင်ကြီးသားတွေကို မေးကြည့်ပါလား။ ဘယ်လောက်အေးလဲဆိုရင် မနက်စောစော ရေသောက်ဖို့ မပြောနဲ့ မျက်နှာသစ်ဖို့တောင် ဒီအတိုင်းမသစ်နိုင်ဘူး။ ရေနွေးလေး နည်းနည်းစပ်ပြီးမှ သစ်နိုင်တယ်။ မနက်စောစော ရေအိမ်သွား လို့ကတော့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် တော်တော်ဒုက္ခရောက် တယ်လို့တော့ အမေကပြောတာပဲ။ ဒီကောင်ကလည်း စပ်စပ်စုစု “ ဘာဖြစ်လို့လဲ အမေ” လိုမေးတော့ အိမ်သာ ထဲကရေတွေ ခဲနေလို့တဲ့ဗျ။
မနက် လေးနာရီလေးဆယ့်ငါးဆို အိပ်ရာထ ကျောင်းဝတ်စုံလဲပြီး ၅နာရီဆို အိမ်ကထွက်တယ်။ လမ်းလျှောက်သွားရတာ ကျူရှင်ကို ရောက်ရင် ၆နာရီထိုးပြီ။ ၆နာရီဆို ကျူရှင်ကလည်းစပြီ။ ကျူရှင်ပြီးရင် ကျောင်းသွား ၊ ကျောင်းကပြန်ရင် ကျူရှင်ကို ပြန်ဝင် ၊ညကျမှ အိမ်ကိုပြန်ရောက်တယ်။ ဒါကျွန်တော် နေ့တိုင်းပုံမှန် လုပ်နေကျအလုပ်ပဲ။
တစ်နေ့ ကျူရှင်ဆရာနဲ့ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတစ်ဖွဲ့ စကားလက်ဆုံပြောဖြစ်ကြတယ်။ ပြောဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကလဲ နာနာဘာဝ (သရဲ) အကြောင်း.....။ ကျနော်တို့ကို ဆရာကပြောတယ် “ နာနာဘာဝဆိုတာ ကြောက်စရာမလိုဘူး။ သူ့တို့ခြောက်တယ်ဆိုတာ လူတွေကို ကြောက်အောင်လို့ ခြောက်တာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ဆီက အမျှလိုချင်လို့ လိုက်ကပ်နေတာ” တဲ့။ ဆရာကဖက်ပြောသေးတယ် “တကယ်လို့ ကြုံခဲ့ရင်လည်း မကြောက်ကြပဲ အမျှပေးဝေ လိုက်ပါ၊ ကုသိုလ်ရပါတရ်” တဲ့။ ကျနော်တိုလည်း ဆရာပြောတုံးကတော့ သူ့တို့ကို (နာနာဘာဝ) တွေကို သနားသွားကြတာပေါ့။ ဟုတ်ပါတယ်လေ ဒါကြောက်စရာမှ မဟုတ်တာ ကောင်ရောင်း ကောင်းဝယ် လုပ်စား အဲ့ မှားလို့ ကောင်းတာလုပ်တာပဲလေ အမျှပေးလိုက်မယ်လို့ တွေးထားလိုက်တယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တပ်ထဲက ဆရာကြီးတစ်ယောက်ကို သရဲခြောက်လိုက်လို့တဲ့။ ဘယ်နားမှာလဲမေးတော့ ကျနော်တို့အိမ် မျက်စောင်းထိုးနားက သစ်ပင်လေးနှစ်ပင်ကတဲ့.....။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ကျူရှင်သွားရင် သစ်ပင်လေးနှစ်ပင်ကို သတိထားလာမိတယ်။ အဲဒီနားရောင်ရင်လည်း ရသမျှ ဘုရားစာကို ရွတ်တော့တာပဲ။ သစ်ပင်လေးနှစ်ပင်ကို ကျော်မှပဲ သက်ပြင်းချ သီချင်းဆိုနိုင်တော့တယ်။ ကြောက်တာကြောက်တာ........။ ဒီလိုနဲ့ နေလာတာ တစ်နေ့တော့....................................
မနက် ၅နာရီဆိုတာကလဲ စောကြီးရှိသေးတယ်။ အေးကလည်းအေး အလင်းရောင်ကလည်း မရောက်သေးတော့ အမှောင်လမ်းထဲမှာပေါ့။ ကျနော်က သွားနေကျဆိုတော့ ဒီလမ်းဒီလမ်းတွေကို မျက်လုံးမှိတ်ပြီး လျှောက်ရင်တောင်း အလွတ်ရနေပြီ။ အဲ .... သစ်ပင်နှစ်ပင် ရှေ့နားလည်းရောက်ရော ကြက်သီးတွေ ထလာတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဖြေးဖြေးလေး လျှောက်ရင်း ဘာပြောကောင်မလဲ ဘုရားစာတွေ ရွတ်တော့တာပေါ့။ ဘုရား စာရွတ်နေရင်း နားထဲမှာ သတိထားလိုက်မိတဲ့ အသံတစ်သံ...........
“ရှပ်......ရှပ်.........ရှပ် ” ဘာသံပါလိမ့်။
လွယ်အိတ်နဲ့ပေါင် ထိတဲ့ အသံများလာလို့ ထင်ပြီး လွယ်အိတ်လေးကို မသိမသာလေး ကိုင်ပြီး ပေါင်နဲ့ ခွာလိုက်တယ်။
“ရှပ်......ရှပ်.........ရှပ် ” ကြားနေရတုံးပဲဗျ။
ဪ ငါ့ဖိနပ် ကများလာဆိုပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ကို ကိုယ် သတိထားပြီလျှောက်ကြည့် လိုက်တယ်။ ဘာမှမထူးခြားလာဘူး။ ကြားနေရတုံးပဲ။
အဲလိုနဲ့ ကျနော်ရပ်လိုက်တယ်။ “ရှပ်......ရှပ်.........ရှပ် ” အသံလည်းရပ်သွားတယ်။
ပြန်လျှောက်ကြည့်တယ် ပြန်ကြားနေရပြန်တယ်။ “ရှပ်......ရှပ်.........ရှပ် ” (ခြေသံ)
ဟာ သေချာပြီ ဒါနောက်ကနေ တစ်ယောက်ယောက်လိုက်လာတာပဲ ဆိုပြီး လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ........ဘာမှမတွေ့ရဘူး။ တစ်ယောက်ထဲဆိုတော့ လူကလည်းပိုပြီး ကြောက်လာတယ်။ အသံကလည်းခုထိကို ကြားနေရတုံး။
ကျနော်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ထွက်ပြေးရမှာလား။ ရှူးရှူး ပဲ ပေါက်လိုက်ရမလား (သရဲဆို ကျင်ငယ်ကို ကြောက်တယ်လို့ ကြားဖူးထားတာကို) အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဆရာပြောတဲ့ စကားကိုသတိရလိုက်တယ်။ အမျှပေးဖို့ကိစ္စ။ အား...ဟုတ်ပြီပေါ့ သူ ကျနော်နောက်ကို လိုက်လာတာ အမျှလိုချင်လို့ပဲဖြစ်ရမယ်။ ငါအမျှပေးလိုက်မယ် ဆိုပြီး စဉ်းစားလိုက်တော့...........
ငါ အမျှပေးလိုက်လို့ ကြီးတော်သားက ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ယူသွားရင်ကောင်းသာ၊ အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ ကြီးတော်သားက ငါ့နား နားမှာ အသက်နက်ကြီးနဲ့
ဆိုပြီးလာလုပ်လိုက်ရင်း အဲ့ဒီနေရာမှာတင် မေ့ပြီး သေသွားနိုင်တယ်။
ကဲ...ဒီတော့ မဖြစ်သေးပါဘူး ဆရာရေ.... ဆရာပေးခိုင်းတဲ့ အမျှလည်း မပေးနိုင်တော့ဘူး။ ကျနော်ပေးနိုင်တာ တစ်ခုပဲရှိတော့တယ် ဆိုပြီး နောက်ကိုလုံးဝမကြည့်ပဲ ငါနဲ့ကို ကိုင်တုတ်တော့ပေါ့။
ငါ့..........................................သား ငါကကြောက်ပါတယ်ဆိုနေမှ ငါနောက်ကနေလိုက်နေရလား။
လူလည်း ကြောက်ကြောက်နဲ့လွတ်တာ အရုပ်တွေကော အနတွေကော တကုန်တော့တာပဲ။
အဲ...... ပြောလို့လဲပြီးရော ဘာသံမှကို မကြားရတော့ဘူး။ ရှေ့နာရောက်တော့ လူသံကြားလိုက်ရတာနဲ့ ပိုပြီးအားတက်သွားတယ်။
ကျူရှင်ရောက်တော့ ဆရာကိုပြန်ပြောပြတော့ ဆရာလည်း ကျနော်ကိုကြည့်ပြီး ရယ်တော့တာပေါ့။ ဒါ ကျနော် ဘဝမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် သရဲအခြောက်ခံရခြင်းပါ။ တိုက်ဆိုင်သွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခုချိန်ထိလည်း သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားပြောဖြစ်ရင် ဒီအကြောင်းလေးကို အမြဲ ပြောပြဖြစ်ပါတယ်။
ခုလည်း ကျနော့် သူငယ်ချင်း ညီအစ်ကို မောင်နှမ တွေကို ပြောပြချင်လို့ ပို့စ်အဖြစ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ဗျာ........
Posted by Ree Noe Mann at 1:50:00 AM 18 comments:
ဒီနေ့ အမေများနေ့ Sunday လည်းဖြစ်တော့ ဘယ်မှ မသွားဘူး ဆိုပြီး နေနေတာ။ မနေ့ညကလည်း လေးနာရီလောက်မှ အိပ်တာဆိုတော့ ၁၀နာရီလောက်မှ အိပ်ရာကထတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ မျက်နှာသစ် ကော်ဖီသောက်ရင်း Online တက်တော့ မကြီး ရောင်ပြန် နဲ့ စတွေ့တော့တာပဲ။ မကြီးက သူ့မှာ ကွဲနေတယ်တဲ့ (အသည်း)။ ရုပ်ရှင် သွားကြည့်မယ် လိုက်မလားတဲ့။ ကျနော်ကလည်း ကိုယ့်မကြီးလိုခင်လို့ ကိုယ့်အတွင်းရေးတွေကို ပြောပြလိုက်တယ်။ မကြီးကလည်းပြောပါတယ် အဲ့ဒါ အရေးမကြီးဘူး လူသာလာခဲ့လို့ပြောတယ်။ မကြီးက ကျနော် အတွင်းရေး ကို မပြောပါနဲ့လို့ပြောထားတာကို သူကလည်း စိတ်ချရတယ်။ လုံးဝအပြောပါဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ အဆိပ်ခွက်က ဘယ်လိုသိသွားလည်း မသိဘူး ထပြီး အပူကပ်တော့တာပဲ။ အဲ့ဒီကနေစပြီး ထူးဆန်းသော လူခုနှစ်ယောက် တွေ့ဆုံခြင်း ဖြစ်လာရတော့တာပါပဲ။
ပထမတော့ Horbour Front MRT Persenger service ချိန်းကြတယ်။ နောက်ပြောရင်းပြောရင်း နဲ့ Ang Mo Kio MRT Persenger service ကိုပြောင်းသွားပြန်ရော။ နောက်ဆုံးတော့Orchid MRT persenger service ကို အတည်ပြုလိုက်ကြတယ်။ ၂နာရီခွဲ တွေ့ကျမယ်ပေါ့ဆိုပြီး လုပ်နေတုံး ဖိုးစိန် တစ်ယောက် သူ့ကိုမခေါ်လို့ဆိုပြီး ရန်လိုက်တွေ့နေတာ့တယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့ မေတ္တာပို့ခြင်းကိုလည်း ကောင်းကောင်းကြီး ခံလိုက်ရတယ်။ တော်သေးတယ် သူပို့တဲ့မေတ္တာက သိပ်မထိရောက်လိုက်လို့ အခုလိုအမှတ်တရ ဒီပို့လေးကို ရေးနေနိုင်တာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သယ်ရင်းကြီး ဖိုးစိန်ရေ........
၁) စတွေ့ပါပြီ ထူးစမ်းသော လူခုနှစ်ယောက်ထဲ က မကြီး (မေတ္တာရောင်ပြန်) ကို စတွေ့လိုက်ရပါပြီ။ အရင်တုံးက ဓါတ်ပုံပဲ မြင်ဖူးတာ ခုတော့ မျက်ဝါ ထင်ထင် တွေ့လိုက်ရပါပြီ။ စတွေ့ကတည်းက ဖုန်းနဲ့နား နဲ့ ကပ်ထားတာ နောက်ဆုံး အိမ်ပြန်တဲ့ထိပါပဲ။
၂) ရောက်လာတဲ့လူကတော့ ညီလေး အဆိပ်ခွက် ပါ။ သူ့ကတော့ တရုတ်ပေါက်စလေးအတိုင်းပါပဲ။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ရုပ်ရှင်လက်မှတ် သွားဝယ်ရတဲ့ တာဝန်ကို သူပဲ ထမ်းဆောင်သွားပါတယ်။
၃) ညီလေး အဆိပ်ခွက် သွားပြီမကြာခင်မှာပဲ ညီမလေး မိုးခါး ( ထာဝရကြယ်စင် )ရောက်လာပါတယ်။ သူမ ဘလော့ဂ်လေးမှာ တင်ထားတဲ့ ရေသူမ ကားထဲက ရေသူမလေးများ ရောက်လာသလား တောင်ထင်မိပါတယ်။ ရေသူမလေး နဲ့ တော်တော်ကို တူတာ ငါးမြီး မပါတာကလွဲရင်ပေ့ါ။
၄) သူငယ်ချင်း အဖော်နှစ်ယောက်နဲ့ အတူရောက်လာတဲ့ ဂျပန် သွားမယ်ဆိုတဲ့ ဂျပန်ကောင်လေး ရောက်လာပါတယ်။
၅) အဖြစ်နဲ့ရောက်လာတဲ့ သူကတော့ တောင်ပေါ်သား ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ပေါ်သား ဆိုတာသိမလား အပြောတက်ဘူး။ မကြီးရောင်ပြန်ရဲ့ Gtalk Message မှာ (တောင်ပေါ်သားရယ် မ လို့ ခေါ်ပြီး ရည်းစားစကားပြောနေပါသည်) လို့ရေးထားတဲ့ တောင်ပေါ်သားလေ။ မကြီး ရောင်ပြန် ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၆) ကျန်တဲ့လူတွေက သူ့ကို ဦးရှင်ကြီး လို့ခေါ်တဲ့ ကိုလဂွန်းအိမ် ပါ။ ရင်ဘက်နဲ့ရေးတဲ့ ကဗျာပိုင်ရှင်လို့လဲ ပြောတယ်။ သူ့ ဘလော့ဂ် ကို အရင်က ဝင်လို့ရတယ် ခုဒီညနေ ပြန်လာတော့ ဝင်လို့မရတော့ဘူး။ သူ့လည်း ပါးလုံး နဲ့ နေဒေးသစ် လိုဖြစ်ပြီးနဲ့ တူပါတယ်ဗျာ။
ရ) ယောက်မြှောက် ဖြစ်တဲ့ သူကတော့ ဟိုတစ်လောကမှ လက်လက်ဆက်ဆက် အသည်းကွဲ ထားတဲ့ ကြယ်ဖြူစင်ပါ။ သူ့ကို ဘယ်သူကလဲ မသိဘူး နာမည်ပေးထားတာ အစားနောက်၊ အသွားနောက် ကြယ်ဖြူစင်တဲ့။ ကြယ်ဖြူစင်နဲ့ အတူ သူမရဲ့ ညီမလေးကိုလည်း ပွဲထုတ်လို့လားပါတယ်။
ကျွန်တော် ဘလော့ဂ်လေးမှာ တွေ့ခြင်းဆုံး (၁၀) ယောက် Tag လေးကို မတက်ခ် ခံရပင်မဲ့ တွေ့ဖူးသွားတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ (၇) ယောက် ကို တော့ အပြင်မှာခင်မင်ခွင့် ရလိုက်ရတဲ့အတွက် အရမ်းကိုဝမ်းသာရပါတယ်။ ကျွန်တော် သတိထားလိုက်မိတာတစ်ခုတော့ ရှိလိုက်တယ်။ အဲ့ဒါ ကတော့ အားလုံးကိုယ်ဆီမှာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အမူအရာများ ကိုမတွေ့ရသလို တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဟိုးအရင်ကတည်းက ခင်လာကျတဲ့ မောင်နှမတွေလိုပဲ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အမေများနေ့ အမှတ်တရ မောင်နှမရှစ်ယောက်တွေ့ ဆုံတဲ့ ပွဲလေးပါပဲဗျာ။ ကျန်တဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ကိုလည်း အခွင့်အရေးရခဲ့ရင် တွေ့ချင်ပါသေးတယ်ဗျာ။
ရုပ်ရှင်ရုံက အထွက်မှာ ရိုက်ထားတာပါ။
Ree Noe Mann ၊ လဂွန်းအိမ် ၊ တောင်ပေါ်သား ၊ အဆိပ်ခွက် ၊ ထာဝရကြယ်စင် ၊ မေတ္တာရောင်ပြန် နှင့် ကြယ်ဖြူစင်
တောင်ပေါ်သား ၊ မိုးခါး ၊ မကြီးရောင်ပြန် ၊ ကြယ်ဖြူစင်ညီမ၊ ကြယ်ဖြူစင် ၊ အဆိပ်ခွက် နှင့် ကျနော်
မကြီး ရောင်ပြန် တစ်ပုဂံ ကုန်သွားလို့ ဘာထပ်စားရမလဲ လို့ပြောနေတယ်ဗျ။
မိုးခါး ကတော့ဆွဲ သာ ဆွဲ လုံးဝ ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုပြီး ခေါင်းတောင်းမဖော်တော့ ဘူးဗျ
ကြယ်ဖြုစင် က ဟီးဟီး တဲ့ စားကြပါအုံးလားတဲ့ (သူမ ပြုံးပြနေသည် သတိတော့ ထားပါ)
Posted by Ree Noe Mann at 10:53:00 PM 20 comments:
နှလုံးသွေးခြင်း ထပ်တူပါ အမေ။
သား အမေ့ကို လွမ်းတယ် အမေ။
အမေ့ကို လွမ်းတဲ့ သားရဲ့ ရင်ခုံသံတွေ
အမေ နားဆင်ဖို့ပါ အမေ။
အမေ့ကို လွမ်းနေတယ် အမေ။
သနပ်ခါး ရေကြဲလေးနဲ့ အမေ့မျက်နှာ
သား အမြဲမြင်ရောင် နေမိတယ် အမေ။
တစ်ချက်လေး မညှိုးတဲ့ အမေ့မျက်နှာ
အမေ ဗိုင်းငင်၊ ချည်ချ သံ
သားအတွက် ထာဝရ ချိုတဲ့
ဂီတ စီးချက် တွေပါ အမေ။
တူညီသော မေတ္တာ ဖြန့်ဝေ
သား အမြန်ဆုံး ပြန်လာမယ်အမေ။
အမေ့အတွက် ဆုမွန်ကောင်းများ တောင်းလို့
သား ကန်တော့ပါတယ် အမေ။
ကိုဆန်းဝင်းဆီ မှ ပြန်လည်ခံစားဖေါ်ပြသည်။
Posted by Ree Noe Mann at 11:59:00 PM 17 comments:
Labels: ကဗျာ, အမှတ်တရနေ့စွဲများ
အ ချစ် စိတ် ကို
ရင် မှာ ခံ စား
နေ လို ပူ လား
လ လို အေး လား
ဝေ ခွဲ မ ရ
တွေး ဝေ ခဲ့ ရ
ရိုး သား နေ တဲ့
ငါ့ ရဲ့ စိတ် ကို
ဝင် ရောက် နှောက် ယှက်
ပြောင်း လဲ တာ လည်း
မင်း ပါ ပဲ နော်
မင်း ရဲ့ နှုတ် ထွတ်
ပျား ရည် တ မျှ
ချို ကြည် အေး သော
စ ကား သံ ထဲ
မူး မေ့ လွှင့် မျော
လှည့် စား တိုင်း လည်း
ခံ ခဲ့ ရ တာ
ငါ ပါ ပဲ ကွာ
ထွက် သက် နောက် ဆုံး
အ သိ တစ် ချက်
ငါ့ ရဲ့ ဘ ဝ
ငါ့ အ ချစ် က
ရောက် ရှိ နေ ခဲ့
မင်း ရဲ့ အိတ် ထဲ
အ ရုပ် က လေး
အ ဖြစ် နဲ့ ပေါ့
Posted by Ree Noe Mann at 1:17:00 AM 12 comments:
အချိန်တွေ တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ် ကုန်လာတာအမျှ ဒီ American Idol အစီအစဉ်လေးကလည်း
နောက်ထပ်နှစ်ပတ်သာ ကျန်ပါတော့တယ်။ Top 13 ကနေစလာခဲ့တာ ခုဆို သုံးယောက်သာ
ကျန်ပါတော့တယ်။ သုံးယောက်လုံးကလည်း သူ့ဟာနဲ့သူ ကောင်းနေကြတာပါပဲ။
Top3မပြောခင် ဒီတစ်ပတ်မှာ နှုတ်ဆက်သွားသူကတော့ Allison ဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းကလေး ၆ဦးထဲမှ အသက်အငယ်ဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့ပြီး Top4ထိပါလာခဲ့တဲ့
သူလေးပါ။ သူမသည်လည်း သီချင်းဆိုကောင်းသူ တစ်ဦးပါ။ ဘက်မလိုက်တဲ့ အားပေးမှုကြောင့်ကျန်တဲ့ သုံးယောက်က သူမထက် ပရိသတ် အားပေးမှုလွန်ကဲစွာ
ရရှိသွားခြင်းကြောင့် ဒီတစ်ပတ်မှာ လက်ပြနှုတ်ဆက်သွားရသူဘွဲ့ကို လက်ဝယ်ရရှိသွားရပါတယ်။
ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ သုံးယောက်ကတော့ နောက်လာမဲ့တစ်ပတ်မှာ ဒိုင်းလူကြီးများ ရွေးချယ်တဲ့
သီချင်းတစ်ပုဒ်ရယ် သူ့တို့ ကိုယ်တိုင်နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းနှစ်ပုဒ်ကို သီဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီသုံးယောက်ထဲမှ နှစ်ယောက်က လာမဲ့ 21/05/09 မှာ Final သီဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
221/05/09 မှာ ဘယ်သူများ Who Will Be Next American Idol ? ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့
သူုက Kris ပါ။
ဒီသုံးယောက်က Top3သုံးယောက်ပါ။
Posted by Ree Noe Mann at 8:10:00 AM 8 comments:
ရှောက်ပေါင်း ဘာစားမလဲ စားချင်တာစား။ လက်တွန်းလှည်းထဲထည့် အဖုံးမပါ ဘာမပါနဲ့
ရေဓာတ် နေဓာတ်ကို သဘာဝကျကျ ရယူထားတဲ့ မြန်မာကြိုက် သွားရည်စာလေးတွေ။ ဘာ
မဆလာတွေသုံး၊ ဘာ အရောင်တင်မှုန့်တွေသုံး၊ ဘာ ငံပြာရည်တွေ သုံးထားလည်းတော့
ချဉ်ငန်စပ် ရောင်းနေတဲ့လူရဲ့ ချွေးစက်တွေတောင် ပါချင်ပါဦးမှာ။ ဘယ်လောက်
နီးစပ်သလဲ။ နိုင်ငံခြားမှာ ရလို့လား။
တွေဝေမနေနဲ့ တရုတ်တန်းသွား တုတ်ထိုးလေး
စားကြည့်လိုက်ဦး။ ဝက်တစ်ကောင်လုံး အမွှေးတောင် စားမရလို့ ချန်ထားရတာ။ ဘာနဲ့
သေမှန်းမသိတဲ့ ဝက်တွေလည်း ပါချင်ပါဦးမှာပဲ။ အရသာ ရှိလေစွ။ မနေ့က တနေ့က
ရောင်းမကုန်တဲ့ အသားတွေလည်း ရောထည့် မူးမူးနဲ့ တွယ်သာ တွယ်လိုက်။ ဘာမှတောင်
သိလိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တုတ်ထိုးစားပြီး အဆီတစ်နေရင် လမ်းဘေးက ဖျော်ရည်လေး
ဝယ်သောက်လိုက်ဦး။ ဟိုကိုင်ဒီကိုင် ကိုင်ထားတဲ့ လက်လေးနဲ့ အားပါးတရ
သံပုရာသီး ဖျော်ရည်လေးကို ဘာရေနဲ့ လုပ်ထားမှန်း မသိတဲ့ ရေခဲနဲ့ ခပ်ဆဆမွှေ၊
ယင်ကောင်က တလောင်းလောင်းနဲ့ အဖတ်စစ်တဲ့ အဝတ်က ဘယ်နှစ်ရက် မလျှော်ဘဲထားတဲ့
ဘေးနားက ရေပုံးခပ်စုတ်စုတ်ထဲ လက်ကို ဆင်းစိမ်လိုက်သေးတယ်။ ပြီးရင် ဂျီးဗလပွနဲ့
လက်နှီးစုတ်ကို သုတ်တယ်။ ကံကောင်းရင် အန်တီ နှံ့နှံ့လေး နယ်ပေးနော်။ ဒါမှ
စားကောင်းတာဆိုတဲ့ သောက်ပျင်းထူထူ မိန်းမတွေကို စားရင်းသောက်ရင်း
ဒါပေမယ့်လည်း အဲလိုနေရာတွေ သိပ်ကြာကြာမနေနဲ့။ လူဗွက်ပေါက်နေတဲ့ လမ်းတလျှောက်
ကြော်လှော်နေကြတဲ့ ဆီပူအိုးတွေ ဆီပူအိုးတွေဆိုတာ။ ဖိုင်နယ်ဒစ်စတီနေရှင်း
မြန်မာပြည်မှာ ရိုက်ကောင်း ရိုက်နေရဦးမယ်။ အိမ်ပြန်တဲ့အခါလည်း
လိုင်းကားလေးနဲ့ပြန်။ ကားနဲ့ ပြန်တယ်ဆိုပြီးတော့ ဟိုဟိုဒီဒီ
ပီကေဖတ်တွေ၊ ချွဲတွေ လက်မှာ ပေကုန်မယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ညဘက် အင်စတန့်
ကော်ဖီလေးလည်း သောက်လိုက်ဦး။ ဘာဓာတ်တွေ ဘယ်လိုအချိုးနဲ့ ပါနေမှန်းတော့ မသိဘူး။
သောက်ကောင်းတာပဲ။ သေကာမှ သေရော။ ကြော်ငြာထားတာတွေကလည်း အလွန်။ မျိုမချပါနဲ့
ငုံထားပါ ဆိုလား ဘာလား။ ထားတော့ ကော်ဖီမကြိုက်ရင် ဘီယာဆိုင်သွား။ အိမ်မှာနေလဲ
မီးပျက်နေမှာပဲ။ မထူးဘူး လင်းလင်းချင်းချင်း ရှိတဲ့ ဘီယာဆိုင်လေးသွားပြီး
တစ်ခွက် ၇၀၀ သောက်လိုက်စမ်းပါ ၆ခွက်လောက်တော့။ ဘာအရေးလဲ။ အသားကင်တွေ စားရင်
ဝါသနာပါရင် ဝါသနာပါရင်.. အင်း အခန်းထဲ ထမင်းဟင်း မှာစားလို့ ရသေးတယ်လို့
အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး စာအုပ်လေးဖတ်ရင်း ခံတွင်းလေးဟာလာရင် လက်ဖက်သုတ်လေး
ရသေးတယ်။ အောင်မလေး ဆိုးဆေးတွေ စိမ်ဆေးတွေဆိုတာ အခုမှ ကြောက်နေကြတာ ကိုယ့်လူ။
တမြန်နှစ်က ကျုပ်ကြီးတော်ကြီး သေတုန်းက ဘာမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး။ ဒီလိုပဲ ဘာမှ
မသိသေးတော့ သေရိုးသေစဉ်ပေါ့။ မြေချတော့တောင် သူကြိုက်တတ်တဲ့ လက်ဖက်လေး
ထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်။ လက်ဖက်သားလေးတွေဆိုတာ ဝင်းလို့။ အညွန့်လေးတွေဆိုတာ
တောင့်လို့ ကော့လို့။ အလောင်းပြန်တူးပြီး တရားစွဲရ အခုဆို
စားချင်တာ စားရလို့လား။ တစ်နေ့ထမင်း တစ်နေ့ဟင်း ကိုယ်တိုင် ဈေးသွားပြီး
Wet Market ဆိုတာကို ဗွက်မားကတ်လို့ နာမည်တော့ တလွဲတွေ လာမပေးကြနဲ့။
သားဈေးငါးဈေးသွားတာ ဟန်လုပ်ဖို့မှ မလိုတာ။ အသက်လေး အောင့်တတ်ရင်
ခြေဖျားလေးထောက်ပြီး သွားတတ်ရင်၊ နားသည်းခံနိုင်ရင် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အကုန်ရတယ်။
ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ ရွှေနိုင်ငံလဲ။ မြန်မာပြည်မှာ နေရတာ ကောင်းတယ်။
မီးပျက်နေလို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်လိုက်တယ်။ ဒါလေးဖတ်ပြီး မြန်မာပြည်
ပေါက်သွားရင် ချက်ချင်းသာ ပြန်လာခဲ့။ သတင်းစာထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတာ ရှိပါတယ်။ ဘာတဲ့
မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်အကိုင်အတွက် မပူနဲ့တဲ့။ အင်း နာဂစ်မှာ သေသွားတဲ့ လယ်သမားတွေ
အများကြီးပဲ။ ဆီလီကွန်ဗဲလီက အလုပ်ပြုတ်လာလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စင်္ကာပူ ကနေ
အပြီးပြန်လာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လယ်ထဲဆင်းပြီး ကောက်စိုက်လို့ ရနေသေးတာပဲ။
ဂုဏ်ရှိစွတဲ့။ ဒါတွေလည်း အလုပ်ပဲလေ။ အဲအဲ တစ်ခုပဲ ဝင်လာရင်တော့ 10% လေး
ရှာလာခဲ့။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် အမှုပတ်နေမယ်။ ဒါက ကွိုင်ရှိတယ်လေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
Posted by Ree Noe Mann at 12:20:00 AM 11 comments:
(A) ပေကျင်း - မေးခွန်းနံပါတ် ၂ ကိုဖြေပါ
(B) တိုကျို - မေးခွန်းနံပါတ် ၃ ကိုဖြေပါ
(C) ပဲရစ် - မေးခွန်းနံပါတ် ၄ ကိုဖြေပါ
(A) ငိုတတ်တယ် - မေးခွန်းနံပါတ် ၄ ကိုဖြေပါ
(B) မငိုတတ်ဘူး - မေးခွန်းနံပါတ် ၃ ကိုဖြေပါ
၃။ သင်ဟာချစ်သူနဲ့ ချိန်းထားတယ်၊
(A) နောက်ထပ်နာရီဝက်တော့ထပ်စောင့်လိုက်မယ် - မေးခွန်းနံပါတ် ၄ ကိုဖြေပါ
(B) ချက်ချင်းပဲပြန်တော့မယ် - မေးခွန်းနံပါတ် ၅ ကိုဖြေပါ
(C) လာတဲ့အထိစောင့်မှာပေါ့ - မေးခွန်းနံပါတ် ၆ ကိုဖြေပါ
(A) အင်း - မေးခွန်းနံပါတ် ၅ ကိုဖြေပါ
(B) ဟင့်အင်း - မေးခွန်းနံပါတ် ၆ ကိုဖြေပါ
၅။ ပထမဆုံးချိန်းတွေ့ ချိန်မှာ သူကသူ့ ကိုနမ်းဖို့ တောင်းဆိုလာရင် ဘာလုပ်မလဲ?
(A) မနမ်းပါဘူး - မေးခွန်းနံပါတ် ၆ ကိုဖြေပါ
(B) သူ့ လက်ခုံကိုဖွဖွလေးနမ်းမယ် - မေးခွန်းနံပါတ် ၇ ကိုဖြေပါ
(C) ကိုယ့်ချစ်သူပဲ၊ နမ်းမှာပေါ့ - မေးခွန်းနံပါတ် ၈ ကိုဖြေပါ
(A) ဟုတ်တယ် - မေးခွန်းနံပါတ် ၇ ကိုဖြေပါ
(B) မဟုတ်ဘူး - မေးခွန်းနံပါတ် ၈ ကိုဖြေပါ
(A) ထင်ပါတယ် - မေးခွန်းနံပါတ် ၉ ကိုဖြေပါ
(B) မဟုတ်ပါဘူး - မေးခွန်းနံပါတ် ၁၀ ကိုဖြေပါ
၈။ တကယ်လို့ သင့်မှာရွေးချယ်ခွင့်ရှိရင် ဘယ်လိုလူအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့ချင်သလဲ
(A) ယောင်္ကျားအဖြစ် - မေးခွန်းနံပါတ် ၉ ကိုဖြေပါ
(B) မိန်းမအဖြစ် - မေးခွန်းနံပါတ် ၁၀ ကိုဖြေပါ
(C) ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါ - TYPE D ( အဖြေတစ်ခါတည်းကြည့်လို့ ရပါပြီ )
(A) ထားဖူးတယ် - TYPE B ( အောက်မှအဖြေကိုကြည့်ပါ )
(B) မထားဖူးပါ - TYPE A ( အောက်မှအဖြေကိုကြည့်ပါ )
၁၀။ သင်ဟာလိမ္မာပါးနပ်သူလို့ ထင်ပါသလား။
(A) ထင်ပါတယ် - TYPE D ( အောက်မှအဖြေကိုကြည့်ပါ )
(B) မထင်ပါဘူး - TYPE C ( အောက်မှအဖြေကိုကြည့်ပါ )
TYPE A: Congratulations!
သင်ဟာချောမောလှပရုံတင်မက ဟာသဥာဏ်ရှိသူ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။
TYPE B: Quite good!
သင့်ရဲ့ ဟာသဥာဏ်ကလူတွေက်ိုပျော်ရွှင်မှုရစေမှာပါ။ သင့်ချစ်သူကလဲသင်နဲ
TYPE C: Not bad!
သင်ဟာဆန့် ကျင်ဘက်လူအပေါ်အလွယ်တကူမဆွဲဆောင်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ ဒါပေမဲ့သူတို
TYPE D: Oh!
ချစ်သူအပေါ်မှာလဲရိုင်းပျစော်ကားတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ပြီးတော့ သင်ဟာဆန်
နေညိုရင့် ဆီမှ ဖေါ်ပြပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
နှစ်သက်လိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ
Posted by Ree Noe Mann at 12:19:00 AM 18 comments:
အမေ.... ဘာလိုလိုနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက အသိအမှတ်ပြုထား ကြတဲ့ အမေများနေ့ကို ရောက်တော့မယ်။
အမေ.... ဝမ်းထဲမှာ ၉လ လုံးလုံး ရှိနေခဲ့တဲ့ သားကို ဒုက္ခလို့ မသက်မှတ်ခဲ့တာ သားသိတယ်။
အမေ.... သားပူစာတဲ့ အခါ မဝယ်ပေးနိုင်ပင်မဲ့ အကုန်လုံး ဝယ်ပေးချင်နေမှန်း သားသိတယ်။
အမေ.... သားဆယ်တန်းအောင်တော့ အမေ မပြုံးပင်မဲ့ ရင်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ဝမ်းသာနေမှန်း သားသိတယ်။
အမေ.... သားအိမ်က ထွက်ခါနီး သားပြောတဲ့ စကားကြောင့် အမေ ပြုံးပင်မဲ့ ရင်ထဲမကောင်းဘူးဆိုတာ သားသိတယ်။
အမေ.... သားအတွက်နဲ့ စိတ်ဆင်းရဲပြီး မျက်ရည်မကျရပင်မဲ့ သားအကြောင်းတွေးပြီး မျက်ရည်ခဏခဏ ကျနေမယ်ဆိုတာ သားသိတယ်။
အမေ.... မနက်တိုင်း သားအတွက် ဘုရားမှာ ဆုတောင်းပေးနေမယ်ဆိုတာ သားသိတယ်။
အမေ.... အနီးကပ် ပြုစုချင်ပင်မဲ့ အခွင့်မသာ တဲ့ သားကို နားလည်ပေးနေမယ်ဆိုတာ သားသိတယ်။
အမေ.... သားလွမ်းသလို အမေလည်း သားကို လွမ်းနေမယ်ဆိုတာ သားသိတယ်။
အမေ... ဘယ်ဘဝက ဝဋ်ကျွေးတွေလဲမသိဘူး အမေနဲ့ခွဲနေရတာ ၉နှစ်တောင် ရှိပြီ အမေရယ်။
အမေ..... ဝဋ်ကျွေး ရှိခဲ့ရင်လည်း ဒီဘဝ ဒီမျှနဲ့ ကျေပါတော့လို့ သားဆုတောင်းနေတယ် အမေ။
Posted by Ree Noe Mann at 12:00:00 AM 18 comments:
Posted by Ree Noe Mann at 10:39:00 PM 29 comments:
အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ သူငယ်ချင်း ညီအစ်ကို မောင်နှမ အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘယ်သူမှ မသိဘဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် လင့်ခ် ယူလိုက်မိလို့ပါ။
ခွင့်တောင်ခြင်း မရှိပဲ ယူလိုက်မိတဲ့ ဒီလို အမိုက်အမဲလေးကို ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့...........
အမည်စရင်း နှင့် တကွ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။
အားလုံးကို ခင်မင်ခွင့်ရတဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက်လည်း လိုချင်တာရှိရင် ယူလိုက် ခိုးလိုက် တောင်းပန်လိုက်ပေါ့ ဟုတ်နေတာပဲ သူ့ဟာသူ
Posted by Ree Noe Mann at 12:21:00 PM 28 comments:
ရွက်ဟောင်းတွေ ကြွေလို့ ရွက်သစ်တွေ ဝေပြန်ပြီ
ပိတောက်တွေဖူးလို့ ငုတွေလည်း မြူးခဲ့ ပြီ..
နှစ်သစ်ကူးလို့ တန် ခူးလည်းရောက်ခဲ့ ပြီ..
ဒီအချိန် ဘာဝနာ ပွားလို့ 
မွှေ့ ယာ ထူထူ စောင်ဖြူဖြူနဲ့ ..အိပ်စက်နေ ရပေမယ့်
အမေ့..အရိပ် မေတ္တာ စိတ်တွေနဲ့ ရစ်ဖွဲ့ ထားတဲ့ ..
တောရွာ ကအမေ့ အိမ်…
တဲသာသာ ဓနိမိုး …အမိုးမလုံ တဲ့ 
မေတ္တာအိမ် ကို ပဲ လွမ်းတယ်
အမေ.. ဒီအချိန် အတာကူး နှစ်ဦး ရဲ့ သင်္ကြန်မှာ
တရားရိပ် ချွေးသိပ်နေပြီပေ့ါ …။။
အိမ်နဲ့ ဝေးတဲ့ အမေ့သား
ပျော်ရာ မနေ တော်ရာနေရတဲ့ဘ၀
ဝေးတစ်နေ ရာ က..အမြဲ ဦးချ ကန်တော့လျက်ပါ အမေ…။
မောင်ငယ် ဆီမှ ပြန်လဲ ခံစားတင်ပြပါသည်။
Posted by Ree Noe Mann at 2:11:00 AM5comments:
Swine Flu ဆိုတာ ဘာလဲ။
Swine Flu ဖြစ်ရင် ဘယ်လို ရောဂါလက္ခဏာတွေ တွေ့ မြင်ရနိုင်ပါသလဲ။
Swine Flu ကို ဘယ်လိုကာကွယ်တားဆီးမလဲ။
Swine Flu ရရှိထားသူ နေမကောင်းသူများအနေနဲ့လိုက်နာသင့်တာတွေက ဘာပါလဲ။
ဒီ Swine Flu ဖြစ်သူများအနေနဲ့ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာ ဆရာဝန်နှင့် အမြန်တွေ့ သင့်ပါသလဲ။
Swine Flu ဖြစ်ရင် မည်သည့်ဆေးဝါးသုံးစွဲသင့်ပါသလဲ။
Posted by Ree Noe Mann at 8:53:00 PM3comments:
အမေများနေ့ အမှတ်အရအတွက်မို့ ချစ်ပါးလုံး ရေးသားသောကဗျာ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Ree Noe Mann at 12:52:00 AM5comments: